မြန်မာ viral ဗီဒီယို တစ်ခု ထွက် ရှိလာ
by FNG on June ကာမ ဆက်ဆံ နေစဉ် အတွင်း လျှို့ ဝှက် ကင်မရာ ဖြစ် မှတ်တမ်း တင် ခံ ရ ပြီး နောက် လူသိ များ သွား သည့် ဗီဒီယို ကြောင့် မြန်...
လန်ထွက်နေအောင် Sexy ဆွဲမယ့် မော်ဒယ် မမ များ (Akaphyo)
တင်ပြသူ အာကာဖြိုး ကဲ အသစ်အဆန်းလေးတွေ ကိုမှ သဘောကျတဲ့ ဘော်ဘော်များ အရင်ပေးတဲ့ MP3 Dancer ကပုံသေးသေးလေး နဲ့ မို သိပ် သဘော မတွေ့ဘူး...
MAWHPAWNG BUGA MASHA NI A HKAM SHA LAM
Mani na ten hta Myitkyina ginwang Mawhpawng mare hta Slg. Lahpai Zau Hpangan'ta shingdu yang hte kaw e, shanhtean'ta hte kaga...
မည်သည့် premium account မှမလိုဘဲ download ယူနိုင်တဲ့ MiPony 1.6.3 Portable
Wednesday, May 2, 2012 ဒီနည်းပညာနဲပဆော့ဝဲလ်ကို မလေးက အကို ကိုနေမင်းခောတ်ဆီကတွေ့ရတာပါ ကောင်းတာနဲံ ပြန်ရှယ်လိုက...
iPhone များအတွက် Ringtone အလွယ်တကူ လုပ်နည်း
အခုပြောမယ့် iPhone များအတွက် Ringtone အလွယ်တကူပြုလုပ်နည်းကို iDevices များနဲ့ မရင်းနှီးသေး သူ Ringtone မလုပ်တတ်သေးသူများနှင့် ကိုယ်တိုင်...
ကျော်ခ | June 29, 2012 | (ဧရာဝတီ) အစိုးရနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ပဏာမ သဘောတူညီချက်ပြုလုပ်ထားသော ကရင်နီ အမျိုး...
အပြင်းစားများGtalk စာသား Please . . . Wait . . . . My Heart is ♥ ♥♥ ♥ ♥♥ ♥ Loading . . . █ 1% ██ 10% ███ 20% ████ 30% █████ 40% ██...
Adobe Photoshop CS6 13.0.1.1 Extended Full Repack | (x32) English Single | 119 Mb (Mediafire link)
(arkaphyo) Adobe Photoshop -aprogram for processing raster graphics. Supports numerous graphic formats. Adobe Photoshop allows yo...
တစ်ခါတစ်လေ မိမိ အသက်ထက်မက ချစ်ရတဲ့ ခင်ပွန်းသည်အတွက် မှန်ကန်တဲ့ဆုတွေ တောင်းပေးနိုင်ဖို့ အခက်တွေ့ရတာ အိမ်ရှ...
by FNG on June 23, 2012 လက်မထပ် ပဲ အတူနေ သည့် ဓလေ့ စရိုက် (Living Together) အထက် No String Attach ခေါ် ချစ်ကြိုက်မှု သံယောဇဉ်ေ...
-ရခိုင်ကိုအထင်သေးမိလို.ဗမာ့ဦးခေါင်းအနောက်ကိုညွတ်ခဲ့ရတယ်။ဒီတော့ရခိုင်ကိုဘယ်တော့မှအထင်မသေးနဲ. အတိတ်ကဖြစ်ရပ်ကိုကြည့်ပြီးသတိထားရမယ်၊ရခိုင်တွေဟာရာဇဝင်ကြီးသလောက်မာနကြီးတယ်။ဘယ်သူ.မှအ ထင်ကြီးတတ်တဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူး။သမိုင်းကြွေးမဆပ်နိုင်အောင်၊နလံမထူနိုင်အောင်မင်းတို.တွေစွမ်းဆောင်တတ်ရမယ်
Posted by myu shadan at 5:19 PM No comments:
တစ်ခါတစ်လေ မိမိ အသက်ထက်မက ချစ်ရတဲ့ ခင်ပွန်းသည်အတွက် မှန်ကန်တဲ့ဆုတွေ တောင်းပေးနိုင်ဖို့ အခက်တွေ့ရတာ အိမ်ရှင်မတိုင်းပါပဲ။ ကျန်းမာရေးအတွက်ပဲ ဆုတောင်းပေးရမလိုလို၊ ဟော..ကျန်းမာရေးအတွက်ဆုတောင်းရင်း ဘေးကင်းလုံခြုံဖို့အတွက်လည်း ဆုတောင်းရပြန်ရော… ဗျာများတဲ့ ဆုတောင်းချက်တွေ မဖြစ်ရစေဘဲ ဘုရားသခင်ရှေ့မှ မိမိခင်ပွန်းအတွက် ဆုတောင်းချက်များကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း တင်ပြတောင်းလျှောက်နိုင်ဖို့..နောက်ပြီး ကျမ်းချက်အခြေပြု (Scripture Based Prayer) ဆုတောင်းခြင်းကိုလည်း ပြုနိုင်ဖို့ အောက်ပါ ဆုတောင်းလေးကို ဝေမျှလိုက်ရပါတယ်။
အဖဘုရားသခင်သမီးရဲ့ ခင်ပွန်းသည်…………..(ခင်ပွန်းသည်၏နံမည်)အတွက် ခေါင်းမှ ခြေအဆုံးတိုင်အောင် ဆုတောင်းပေးပါ၏။
“သူ့ရဲ့အတွေး” (his mind)- သူ့မှာ သခင်ခရစ်တော်၏အတွေး၊ သခင်ခရစ်တော်၏ စိတ်သဘောထားအတိုင်း ရှိစေတော်မူပြီး ကိုယ်ခန္ဓာအလိုသို့မလိုက်ဘဲ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်သာလျှင် ဦးဆောင်လမ်းပြဦးဆောင်စေတော်မူပါ။ (၁ကော ၂း၁၆)
“သူ့ရဲ့အမြင်” (his eyes)- သွေးဆောင်ဖျားယောင်းမှုနှင့် ဒုစရိုက်အပြစ်ပြုလုပ်ခြင်းကို လှည့်မကြည့် မိစေရန် သူ၏ အမြင်အာရုံကို ကွယ်ကာတော်မူပါ။ (မဿဲ ၆း၁၃၊ မာကု ၉း၄၇)
“သူ့ရဲ့အကြားအာရုံ” (his ear)- သခင်ဘုရား ညွှန်ကြားနေသော ဖြည်းညှင်းသည့် အသံများကို ကြားနိုင်သော နားတစ်စုံကို ပေးသနားတော်မူပါ။ ( ၃ရာ ၁၉း၁၂၊ ဆာလံ ၃၂း၈)
“သူ့ရဲ့နှုတ်ထွက်စကား” (his mouth & speech)- သူ့နှုတ်မှထွက်ကျလာသော စကားများသည် သခင့်ကို ချီးမွမ်းနေသော စကားများသာ ဖြစ်စေတော်မူပါ။ (သုတ္တံ ၁၉း၁၄)
“သူ့ရဲ့ပုခုံးတစ်စုံ” (his shoulders)- သခင်ဘုရားသည်အရာအားလုံးကို တတ်စွမ်းနိုင်သည်ကို ယုံကြည်လျက် သူ့ပုခုံတွင်ထမ်းထားရသော ၀န်ထုတ်ဝန်ပိုးနှင့် ပူပင်မှုများကို ကိုယ်တော်ထံသို့ ချထားနိုင်စေရန် မစတော်မူပါ။ (ကမ္ဘာ ၁၈း၁၄၊ ယေရမိ ၃၂း၁၇)
“သူ့နှလုံးသား” (his heart)- သူဟာ သခင်ဘုရားအား စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ ချစ်နိုင်ရန်၊ ယုံကြည်နိုင်ရန် ကောင်းကြီးပေးတော်မူပါ။ (တရား ၆း၅၊ သုတ္တံ ၃း၅)
“သူ့ရဲ့လက်မောင်း” (his arms)- ဘုရားသခင်သည်သူ့ရဲ့ခွန်အား၊ သူ့ရဲ့အစွမ်းသတ္တိ ဖြစ်စေတော်မူပါ။ (ဆာလံ ၇၃း၂၆)
“သူ့ရဲ့လက်တစ်စုံ” (his hand) - သူ့လက်ဖြင့် ကြိုးစားအားထုတ်၍ ရရှိလာသမျှသည်အမှန်စင်စစ် ဘုရားသခင်ထံမှ လာသော ဆုကျေးဇူးဖြစ်ကြောင်းသိစေတော်မူပါ။ (ဒေသနာ ၃း၁၃၊ ၅း၁၉)
“သူ့ရဲ့နံဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်” (his sides) - ဘုရားသခင်ကိုချစ်သော သူငယ်ချင်းများနှင့် သူ့အားဝန်းရံစေပြီး သူ့အား ချီးမြှောက်တတ်သော သူငယ်ချင်းများ သူ့နံဘေးတွင်ရှိစေပါ။ (သုတ္တံ ၂၇း၁၇၊ ၁၂း၂၆)
သူ့ရဲ့ကိလေသာ (his sexuality)-ကိလေသာလွန်ကျုးမှုကိုဖြစ်စေနိုင်သော သွေးဆောင်မှုများမှ ကွယ်ကာ၍သူ့ရဲ့ ကျေနပ်အားရခြင်းများသည် ပေါင်းဖော်သောမယားဖြစ်သူကျွန်ုပ်နှင့်သာ ဖြစ်စေပါ။ ( မဿဲ ၆း၁၃၊ သုတ္တံ ၅း ၁၈-၁၉)
သူ၏ခြေထောက်များ (his legs) - သူသည်အမှန်တရားပေါ်တွင်သာ ရပ်တည်တတ်ဖို့ရန်နှင့် ယုံကြည်ခြင်း၌ မြဲမြံစွာ မရပ်တည်ခြင်းသည် လဲကျခြင်းအကြောင်းသာ ဖြစ်မည်ကို သဘောပေါက် စေတော်မူပါ။ (ဆာလံ ၆၂း၆၊ ဟေ ၇း၉)
သူ၏ဒူးများ (his knees)- သူသည် ကိုယ်တော်၏ရှေ့မှောက်တော်မှာ ဒူးထောက်နှိမ့်ချခြင်းရှိစေပြီး နှိမ့်ချခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်တော်၏ စကားတော်အား နှိမ့်ချစွာလိုက်လျှောက်ခြင်းအားဖြင့်သာ အောင်မြင်မှုများရရှိနိုင်ကြောင်း သိရှိစေမူပါ။ (ယာ ၄း၁၀၊ ယောရှု ၁း၈-၉)
သူ၏ခြေလှမ်းများ (his feet)- ကိုယ်တော်ညွှန်ပြသောလမ်းကို သိပြီး ကိုယ်တော်၏ လမ်းအတိုင်း လိုက်လျှောက်နိုင်စေရန် ကူမတော်မူပါ။ (ဆာလံ ၂၆း၃၊ သုတ္တံ ၄း၂၅)
သခင်ယေရှုခရစ်၏ နာမတော်မြတ်ကို အမီပြု၍ ဆုတောင်းလျှောက်ပါ၏။ အာမင်။
Sharon Jyanes ရေးသားသော Praying for your husband from head to toe အား ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ဆိုပါသည်။
Posted by myu shadan at 5:07 PM No comments:
1. အသားထဲကလောက် ပြသာနာ
2. ဘာသာရေးကို ခုတုံးလုပ် ပြသာနာ
3. စီးပွားရေး ပြသာနာ
4. လူ့အရင်းအမြစ် ပြသာနာ
5. အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ အင်အားနည်း ပြသာနာ
6. ဗမာကြောက်တဲ့ ပြသာနာ
7. ကချင်မျိုးနွယ်စုများ မစည်းလုံးခြင်း ပြသာနာ
ကိုယ့်လူမျုးကိုဘဲ ပြသာနာ ရှာတဲ့ အဖွဲ့ဖြစ်တယ်။ တိုးတက်ရေးကို ဟုတ်သိပတ်သိမလုပ် ကိုယ့်ယုံကြည်ကာ ခေါင်းစဉ်ဖြစ် ထင်တိုင်းကြေးတယ်။ တချို့က ဒုတိယပင်လုံကို သတိ သင့်တယ် ဒီတခါမှားရင် နောက်ပြန်ဆုတ်ဖို့ ခက်ကြောင်းပြောလည်း ငြိမ်းချမ်းရေးမှငြိမ်းချမ်း ရေး စွတ်ငြိမ်းချမ်းချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် အသားထဲက လောက်ပြသာနာက အချိန်တန်ရင် ငြိမ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ထိုအတန်းစားသည် လက်တစုပ်စာမျှသာ။ သိုပေမယ့် အသားထဲက လောက်များလည်း အသိတရားရဖို့ သင့်ပါပြီ။
ဘာသာရေးဟာ နိုင်ငံရေး၊ နိုင်ငံရေးဟာ ဘာသာရေး မသဲကွဲကြပါဘူး။ ကျနော့် အမြင်ပြော ရရင် သာသာရေးဟာ ပြည်သူရဲ့အခြေခံတွေကိုဘဲ လုပ်သင့်ပါတယ်။ ဥပမာ လူ့ပညာရေးအ ရင်းအမြစ်တည်ထောင်တဲ့ အရေးကြီးကိစ္စလိုမျိုးမှာပေါ့။ ဘာသာရေးဟာ နိုင်ငံရေးမဖြစ်နိုင် တလို နိုင်ငံရေးဟာလည်း ဘာသာရေးမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်ဒီလို ပြောရသလဲဆိုရင် ကချင်ဒေသမှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာကွဲတွေ များပြားလို့ပါပဲ။ ဒါက အဓိကအကြောင်းရင်းထဲက တခုပါ။ ဒါကြောင့် ဘာသာရေးကို အခြေမခံတဲ့ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းက အင်းအားကြီးလာ ရပါမယ်။ (နံပါတ်၅ တွေ ဆက်လက်ဖော်ပြမည်) ဘာသာရေးထက် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း က အင်အားကြီးရပါမယ်။ ဒါမှသာ အားလုံးပါဝင်လာမည် ဖြစ်ပါတယ်။
သံယံဇာတလုပ်တဲ့ စီးပွားရေးတိုင်းလိုလိုက စစ်အစိုးရ ထိန်းချုပ်မှု အောက်မှာပါ။ ကချင်ဒေသ တိုးတက်ရေးအတွက်က အစိုးရရဲ့ ဘတ်ဂျတ်ကိုဘဲ မျော်နေရပါတယ်။ ကချင်ပြည်နယ်လွတ် တော်ဟာ စစ်အစိုးရထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာ အပြည့်ရှိတယ်ဆိုတာ သိသာတယ်။ ကချင်ပြည် နယ်တိုးတက်ရေးအတွက် ဟုတ်တိပတ်တိ တခုမှ မလုပ်ပါဘူး။ သံယံဇာတတွေ ကုန်သ လောက်ဖြစ်နေတာတောင် ကချင်ပြည်နယ်ဟာ တုန်းရင်းကတုန်းရင်းပဲ။ ကချင်လူမျိုးတိုး တက်ရေး အတွက် စီးပွားရေး ဟုတ်တိပတ်တိ မရှိဘူး။ ကချင်လူငယ်တွေ အလုပ်ရဖို့ အလုပ် ရုံတွေ မရှိပါဘူး။ ဒါလည်း ပြည်နယ်အစိုးရမလုပ်ရင် အစိုးရကိုဘဲ မျော်နေရတဲ့ ပြသာနာပါ။
အခုဆိုရင် ဖုန်းဘေထည့်ရင်တောင် အခွန်ထမ်း (အခွန်ဆောင်) ရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံတိုးတက်ဖို့လား။ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ နေပြည်တော် တိုးတက်ဖို့ဘဲလား။ ဒါကတော့ စောင့် ကြည့်ရမယ့် အခြေအနေဘဲ ရှိပါသေးတယ်။
လူ့အရင်းအမြစ် မရှိတာက အဆိုးဆုံးပြသာနာပါ။ ဒီလို ဖြစ်အောင် ပညာရေးစနစ်ကိုစိတ် ကြိုက် ဖန်တီးခဲ့ကြတယ်။ KIO/KIA ကို လက်ညိုးထိုးပြီး ကချင်ဒေသကို ခေါင်းပုံဖြတ်ခဲ့ကြ တယ်။ အခုချိန်ကျနော်တို့ ကချင်လူမျိုးတွေရဲ့ လူ့အရင်းအမြစ်ကို ဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲ ဆိုတာ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါက ပင်လုံပျက်စီးစေခြင်းနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။ ဗမာနဲ့အတူအတူနေ နေ၊ မနေနေ လုပ်ရမှာက ကချင်လူမျိုးရဲ့ လူ့အရင်းအမြစ်ကို တည်ထောင်ရမှာပါ။ ဒါက ပင်လုံထက် အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါကို ကချင်တမျိုးသားလုံးသိတဲ့နေ့ဟာ ကချင်ဒေသငြိမ်းချမ်း ရေးအစစ်အမှန်ရတဲ့ နေ့ပါပဲ။
အရင်က ပိုဒ့်မှာလည်း ပြောဖူးပါတယ်။ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေ အင်အားနည်းသွား ကြတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းကို အလုငွေနဲ့တည်ဆောက် ကြပါတယ်။ အဖွဲ့ဝင်တွေလည်း လုပ်အားပေးပါပဲ။ ဒါက အင်အားနည်းစေတဲ့ အကြောင်း ရင်းပါပဲ။ ပြီးတော့ ဦးတည်ချက်ဟာ ဝမ်းဝေး (One Way) ပါပဲ။ တခြားတိုးတက်ရေးတွေ မလုပ်တော့ပါဘူး။ Pat Ja San ဘိန်းတိုက်ဖြတ်ရေးအရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း ဘိန်းပဲ တိုက်ဖြတ်ပါတယ်။ ဘိန်းမရှိရင် အလုပ်မရှိ မိန်သွားပါတယ်။ ထိုတို့ အဖွဲ့အစည်းတွေ အရမ်း များပါတယ်။
တချို့က စစ်အစိုးရကို သာမက ဗမာလူမျိုးကိုပါ ကြောက်ကြပါတယ်။ ကချင်လူမျိုးဆိုတာ သမိုင်းရှိတယ်။ Land Mark လည်း ရှိပါတယ်။ ဗမာလူမျိုးတွေကို ဘာအကြောင်းနဲ့မှ ကြောက် စရာမရှိပါဘူး။ ကြောက်ရမယ်ဆိုရင် သူတို့က ငါတို့ကို ကြောက်ရမှာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် သမိုင်းကြွေးက ဆပ်မကုန်ပါဘူး။ ကြောက်ရင် ဗမာကဘဲ ကချင်လူမျိုးကို ကြောက်ရမှာပါ။ လက်နက်ဆိုတာ သမိုင်းလောက်ကြောက်စရာမရှိပါဘူး။ ဗမာလူမျိုးက ကချင်တွေကို တောင်ပန်းရပါမယ်။ သမိုင်းအဆက်ဆက် ကချင်တွေကို လိမ်ညာခဲ့တဲ့ အပြစ်ပေါ့။ ထိုအပြစ်ကြွေးကို တောင်းပန်သင့်ပါတယ်။
လက်နက်ဘယ်လောက်ရှိရှိ၊ လူဘယ်လောက်များများ သမိုင်းအရ ဗမာကို ကြောက်စရာ မရှိ ပါဘူး။ ဒါကို ကချင်လူမျိုတိုင်း သတိချပ်စေချင်ပါတယ်။
စည်းလုံးခြင်းဟာ ဒီလောက်အရေးမကြီးဘူးလို့ ကချင်တော်တော်များများက ထင်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါကတကယ် အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီ့ထက်ပိုစည်းလုံးသင့်ပါတယ်။ဒီ အခြေခံ အချက်တွေကို မလုပ်ဘူးဆိုရင် ကချင်ဒေသဟာ စစ်အာဏာရှင်လက်အောက် အခွံတတ် တတ် မျှသာ။ အခုသွေးကွဲဖို့လည်း မဖြစ်နိုင်၊ အခွံတတ်တတ်သာ ရှိနေတဲ့ ကချင်ဒေသမှာ ကချင်လူမျိုးအချင်းချင်းသွေးကွဲဖို့က အချိန်မရှိသေးပါဘူး။
အခုချိန်က ဘာလုပ်ရန် အသင့်ဆုံးလဲဆိုတာက ကချင်လူမျိုးများရဲ့ ကံကြမ္မာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by myu shadan at 10:10 AM No comments:
မလုပ်နိုင်ရင် ပင်လုံညီလာခံလို့ နာမည် မပေးပါနဲ့
ပဋိဥာဉ်တစ်ရပ်ကို ချိုးဖောက်ပြီး အသစ်ဆွဲဖို့ဆိုတဲ့ ကိစ္စဟာ အဟောင်းကို ဖျက်မှ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အသစ်လုပ်ချင်ရင် အဟောင်းဖျက်ဆိုတဲ့ သဘော ပါ။ ပြည်ထောင်စု ( သို့မဟုတ် ) တိုင်းပြည် တည်ထောင်တဲ့ ပဋိဥာဉ်တွေ (သို့မဟုတ် ) အုပ်ချုပ်သူ ပဒေသရာဇ်တွေနဲ့ဖြစ်စေ ၊ အစိုးရနဲ့ဖြစ်စေ ပြည် သူတွေနဲ့ အာဏာခွဲဝေမှု သဘောတူညီထားတဲ့ ပဋိဥာဉ်တွေကိုတိုးတက်တဲ့ အတွေးအခေါ်ရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေက ဘယ်တော့မှ ဖောက်ဖျက်ဖို့ မကြိုးစားကြ ပါဘူး။ အရပ်သားအစိုးရမှန်သမျှကလည်း အဲဒီ ပဋိဥာဉ်တွေအတိုင်း နိုင်ငံကို ဆက်လက်တည်ဆောက်ကြသလို တစ်ခါအာဏာရှင်စိတ်မရှိတဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ ကလည်း တတ်နိုင်သမျှ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို လိုက်နာကျင့်သုံးပြီး အဲဒီ ပဋိဥာဉ်ပါပြဌာန်းချက်တွေနဲ့အတူ ဒီမိုကရေစီ စနစ်အောက်မှာ လိုက်ပါလာကြတာ အလေ့အထပါပဲ။
အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ ခရစ်နှစ် ၁၂၀၀ ကျော် ကာလတွေကတည်းက စခဲ့တဲ့ ပဒေသရာဇ် အုပ်ချုပ်သူု ဘုရင်တွေရဲ့ အကြွင်းမဲ့ အာဏာကို မှူးမတ်တွေ ကတဆင့် ပြန်လည်ထိန်းညှိဖို့ စခဲ့တဲ့ မဂ္ဂနက်တာစာချုပ်ကြီးက ဘုရင်တွေ ထံက အာဏာကို ခွဲဝေယူတဲ့ အလေ့အကျင့်ရဲ့ အစအဖြစ် ယခုအထိ တိုင်အသိမှတ်ပြုထားဆဲဖြစ်ပြီး အဲဒီ စာချုပ်ခေတ်ကနေတဆင့် စည်းမျဉ်းခံဘုရင်စနစ် ၊ ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီခေတ်တွေကို အဆင့်ဆင့်ကူးပြောင်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံမှာတော့ လွတ်လပ်ရေးကြေငြာစာတမ်းက အခုထိ သက်ဝင်နေဆဲဖြစ်သလို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ အစလို့ပြောနိုင်တဲ့ ၁၃ ပြည်နယ်ပေါင်းစည်းမှုမှာလည်း ၁။ အချုပ်အခြာ အာဏာကိုပြည်သူများ ပိုင်ဆိုင်ရေး ၂။ ပြည်သူပြည်သားတိုင်း လုံးဝ တန်းတူညီမျှရေး ၊(၃) ။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့က အာဏာကို မတရားသောနည်းလမ်းဖြင့် သိမ်းပိုက်မှုကို အလွှဲသုံးစားပြုမှုမှ ကာကွယ်ရေး ၊(၄)။ ပြည်နယ်တွေရဲ့ အခွင့်ရေးကို ဗဟိုပြည်ထောင်စုမှ ၀င်ရောက်စွပ်ဖက်မှုမှ ကာကွယ်ရေးဆိုတဲ့မူကြီး လေး ချက်ကို အခြေခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ထက်တိုင်လည်း အခြေခံ ဥပဒေမှာ လိုတိုးပိုလျှော့ အနည်းငယ်သာလုပ်လို့ အဲဒီမူတွေအတိုင်း ဆက်သွားနေ ဆဲဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန် သမ္မတ အဆက်ဆက်မှာ စစ်သားတွေ တပ်မတော်သား စစ်မှုထမ်းကနေတဆင့် သမ္မတ ဖြစ်လာခဲ့သူတွေကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပေမဲ့ သူတို့ကလည်း လွတ်လပ်ရေးကြေငြာစာတမ်းပါပြဌာန်း ချက် တွေ ၊ မူတွေ ၊ အခြေခံ ဥပဒေတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံးလိုက်နာကျင့်သုံးကြတာကြောင့် တိုင်းပြည်က ဒီကနေ့အထိ ဖက်ဒရယ်စနစ်နဲ့ ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ ခိုင်ခိုင်မာမာရပ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ အိန္ဒိယဆိုရင်လည်း လွတ်လပ်ရေးကြေငြာ စာတမ်းရှိသလို ၊ ကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်လည်း ကုလသ မဂ္ဂစတင်တည်ထောင် တဲ့ ပဋိဥာဉ်ဆိုတာ ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ ပဋိဥာဉ်ကလည်း တစ်ခုရှိပြီး သား ဖြစ် တဲ့အတွက် နောက်တစ်ခုဆွဲမယ်ဆိုရင် အရင်တစ်ခုက ဖျက်ရမဲ့ သဘောဖြစ်ပါတယ်။
ရှိပြီးသားပဋိဥာဉ်တွေ ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းရှိတဲ့ အခြေခံ ဥပဒေ သူတွေကို ဖောက် ဖျက်သူတွေလည်း ကမ္ဘာမှာရှိပါတယ်။ အာဏာရှင်တွေပါ။ အာဏာရှင်ဆန် တဲ့အတွက် ရှိပြီးသား တိုင်းပြည်တည်ထောင်ရေးအခြေခံမူတွေ ၊ တန်းတူရေး မူတွေကို အကြောင်းအမျုိးမျိုးပြ ဖျက်ကြတော့တာပါပဲ။ အာဏာသိမ်းပြီး ဖွဲ့စည်း ပုံတွေကိုလည်း လိုရာရေးဆွဲတဲ့အတွက် သူတို့ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေက လူထုထောက်ခံမှု မရှိတာ ၊နိုင်ငံတကာထောက်ခံမှု မရှိတာတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရပြီး သူတို့ရဲ့ စိတ်တိုင်းကျပြင်ဆင်ရေးဖျက်တာတွေကလည်း တရားမ၀င် ဖြစ်နေ တတ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ပင်လုံစာချုပ်ဟာ ပြည်ထောင်စု တည်ထောင်ဖို့ ပဋိဥာဉ် ဖြစ်ပါတယ်။ လွတ်လပ်ရေးကြေငြာစာတမ်းလည်းရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် အဲဒီ ပဋိဥာဉ်နဲ့ ကြေငြာစာတမ်းဟာ အာဏာရှင်အစိုးရအဆက်ဆက် မကြာခဏ ချိုးဖောက်ခံရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တရားဝင်မှုအရဆိုရင်တော့ လွတ်လပ်ရေးနေ့ ၊ ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့ ပြည်ထောင်စုနေ့ ၊ ပင်လုံစာချုပ်ကို ဦးဆောင်သူတွေ ကွယ်လွန်တဲ့ အာဇာနည်နေ့တွေ ရှိနေဆဲဖြစ်တာကို ကြည့်ရင် အသက်ဝင်နေဆဲဆိုတာ လုံးဝ မငြင်းနိုင်တဲ့ အရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါ တယ်။
လူထုက ထောက်ခံတဲ့ ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ အာဇာနည်နေ့ကို နိုင်ငံတ၀ှမ်းမှာ ကျင်းပကြတာ ၊ လူထုက ပန်းခွေချ တာကြည့် ရင်ပဲ ပင်လုံရဲ့ တန်ဖိုး အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ တန်ဖိုး အပေါ် ပြည် သူတွေရဲ့ အသိမှတ်ပြုလက်ခံမှုကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ပင်လုံဆို တာ မြန်မာ့သမိုင်းမှာဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲလို့ဆိုနိုင်တဲ့ အုပ်ချုပ်မှု မတူညီ ၊ မျုိးနွယ်စု မတူညီတဲ့ တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုတွေနဲ့ ဗမာခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်အောင် ဆန်း တို့အကြား အင်္ဂလိပ်အောက်ကနေ လွတ်လပ်ရေးအတူတကွယူဖို့ ၊ တန်းတူရည်တူနဲ့ ဒီမိုကရေစီကို မျှဝေခံစားဖို့ ၊ ပြည်ထောင်စုထူထောင်ဖို့ ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ စိတ်တူကိုယ်တူ ၄ ပြည်ထောင် ပူးပေါင်းခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ပင်လုံစာချုပ်အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင် ၊ ပင်လုံကတိက၀တ် ၊ ပင်လုံစိတ်ဓါတ် သုံးခုတွဲမှ ပြည့်စုံမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ လက် မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့ ပင်လုံစာချုပ်ကို ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပဲ (၁) လွတ်လပ်၍အချုပ်ခြာအာဏာ ပိုင်သောနိုင်ငံ (၂) လွတ်လပ်သော သဘောဆန္ဒနဲ့ အညီပူးပေါင်းပါဝင်ကြခြင်း ၊(၃) တန်းတူရေး (၄) ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့် (၅) ဖက်ဒရာယ်ပြည်ထောင်စုစစ်စစ်မူ ( ၆) လူနည်းစုတွေအတွက် အခွင့်ရေးကာကွယ်ခြင်း (၇) ဒီမိုကရေစီ အခြေခံ အခွင့်ရေးများ (၈) ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ စနစ် (၉) ဘာသာရေးကို အခြေမခံ တဲ့ နိုင်ငံ (၁၀) ခွဲထွက်ခွင့်ဆိုတာကိုအခြေခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သျှမ်း (ရှမ်း) ၊ ကချင် ၊ ချင်း စတဲ့ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ ပင်လုံစာချုပ် အပိုဒ် (၇) မှာဆိုရင် ‘ နယ်စပ်ဒေသများ၏ နယ်သူနယ်သားတို့သည့် ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံများတွင် အခြေခံများအဖြစ် အသိမှတ်ပြုထားပြီးသော အခွင့်ရေးများ ခံစားပိုင်ခွင့်ရရှိစေမည် ။ ‘ ဆိုတာ ပါရှိတယ်။
ယခင်ကတည်းက သျှမ်းပြည်က ရရှိထားတဲ့ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ရပိုင်ခွင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးတွေကို ထိခိုက်ခြင်းမရှိဖို့ဆိုတာ ပါဝင်သလို ၊ အပိုဒ် (၉) မှာကတော့ ဗဟိုအစိုးရကနေရတဲ့ အခွန်တွေထဲက ကချင်တောင်တန်းနယ်နဲ့ ချင်းတောင်တန်းနယ်တွေထဲက ရသင့်ရထိုက်တဲ့ ဘဏ္ဍာရေး အကူညီတွေ ထိခိုက်မှု မရှိစေရ ။ မြန်မာပြည် နဲ့ ပြည်ထောင်စု သျှမ်းပြည် (နယ်မြေစု) ရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးအစီစဉ်များကဲ့သို့ ကချင်တောင်တန်းနဲ့ ချင်းတောင်တန်းဒေသတွေ အတွက် အလားတူ ဘဏ္ဍာရေးအစီစဉ်တွေကို ထားရှိကျင့်သုံးရန် ဖြစ်တယ် ဆိုပြီး ပါရှိပါတယ်။ သဘောက တော့ အင်္ဂလိပ်အုပ်ချုပ်မှုအောက် မှာက တည်း က သျှမ်းပြည်ပဒေသရာဇ် စီရင်စုက ရနေခဲ့တဲ့ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးတွေ ၊ သယံဇာတခွဲဝေခွင့်နဲ့ အခွန်ခွဲဝေခွင့်တွေကို ကချင်နဲ့ ချင်း နယ်တွေကလည်း ရရှိစေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ခွဲထွက်ခွင့်ကတော့ ၁၀ နှစ်ပေါင်းကြည့် တန်းတူရည် တူမရှိဘူးဆိုရင်ခွဲထွက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ ပင်လုံကတိက ၀တ်ကြောင့် ၁၉၄၇ ခုနစ် အခြေခံ ဥပဒေမှာပါလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း ၂၁ ရာစုပင်လုံနဲ့ ပတ်သက်လို့ သံသယ၀င်နေသူတွေ ရှိနေ တာကို စာရေးသူသတိထားမိပါတယ်။ အများစုက သံသယ၀င်နေကြ တာက တိုင်းရင်းသားတွေဘက်ကပါ။ ပင်လုံဆိုတာဘာကိုလဲဆိုတာ အမြဲမေး ခွန်းထုတ်တာ သတိထားမိပါတယ်။ ဆိုရရင်တော့ အဟောင်း (၂၀) ရာစုက စာချုပ်က အစိုးရအဆက်ဆက်အနေနဲ့တစ်ခါမှ အသိ မှတ်ပြု ဖော်ဆောင်ပေး ခဲ့မှု မရှိခဲ့ဘူး ။ ဒါကြောင့် ဘယ်အစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ် ဗမာ အစိုးရအဖြစ် တိုင်းရင်း သားတွေက မြင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
အခုလုပ်မဲ့ ၂၁ ပင်လုံဟာ နဂို ၁၉၄၇ ပင်လုံရဲ့ အဆက်လား အဟောင်းရဲ့ ရလာဒ်ကို ပယ်ဖျက်တာလား စသဖြင့် မေးမြန်းကြတာလည်း သတိထားမိပါတယ်။
ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောတာက ပင်လုံစိတ်ဓါတ် ၊ ပင်လုံ သတ္တိဆိုတာမျိုးတွေလောက်ပဲကြားရပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ ဖက်ဒရာယ် ပြည်ထောင်စုပြောနေပေမဲ့ ဘယ်လိုသွားမလဲ ကိုယ်စားလှယ်တွေကို ရေရေရာရာချမပြနိုင်ပါဘူး။ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဖို့ ဆိုတဲ့ ကိစ္စကို ငြိမ်းချမ်းရေးရပြီးမှာပြင်မယ်ဆိုပြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌ ဦးဝင်းမြင့်က ပြောနေပြန်ပါတယ်။ နောက်အခုညီလာခံမှာ ဆွေးနွေးမှာက နိုင်ငံရေးနဲ့ လုံခြုံရေးကိစ္စသာဖြစ်ပါတယ်။ အရေးကြီးတဲ့ သယံဇာတခွဲဝေခွင့် မပါပါဘူး။
ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဒီနေရာမှာတော့ ကွာခြားပါတယ်။ ဗိုလ် ချုပ်အောင်ဆန်းကတော့ ရှင်းပါတယ်။ အဲဒီ ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်တဲ့ အချိန်မှာ သူ့မှာ နိုင်ငံရေးအာဏာ ၊ အုပ်ချုပ်မှု အာဏာ အပြည့်မရှိပေမဲ့ တနှစ်အတွင်း လွတ်လပ်ရေးယူမယ်။ တောင်တန်းမြေပြန့် မခွဲခြားပဲ လွတ်လပ်ရေးယူမယ်။ အားလုံးတန်းတူအခွင့်ရေးရစေမယ်ဆိုတာနဲ့ အုပ်ချုပ်မှုအာဏာ ၊ သယံဇာတ အခွန်ဘဏ္ဍာ ခွဲဝေမှုကအစဆိုပြီး သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခြေခံ ဥပဒေအရ အာမခံချက်ရှိအောင်လည်း သူမကွယ်လွန်ခင် တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော် အစည်းဝေးတွေမှာ တင်သွင်းတဲ့ လမ်းညွှန်ပြဌာန်းချက် အဆို (၇) ရပ်မှာ ပါရှိခဲ့ပါတယ်။ သူမကွယ်လွန်ခင် တလအလို ၁၉၄၇ ခုနစ် ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့မှာ တင်သွင်းခဲ့တာပါ။
ဒါပေမဲ့ ဗိုလ်ချုပ် ကွယ်လွန်သွားတော့ ဆက်ခံသူတွေက ကတိတွေ စဖျက်တော့ တာပါပဲ။ သမ္မတအဖြစ် တိုင်းရင်းသား တစ်ဦးကိုခန့်ထားခဲ့ပေမဲ့ အာဏာ မရှိ သလို ၊ ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်မှုအတွက် ရွေးကောက်ပွဲက ရွေးချယ်တာ မဟုတ်ပဲ ဗဟိုအစိုးရက ခန့်ထားတဲ့ စနစ်ကို ကျင့်သုံးခဲ့ပါတယ်။
အခုလတ်တလော ဝေဖန်နေ ကြတဲ့အထဲမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာ သူ့နယ်မြေနဲ့ သူ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ တိုင်းရင်းသားပါတီအချို့ကို အန်အယ်လ် ဒီဘက်က နယ်မြေအုပ်ချုပ်ခွင့်ဖြစ်တဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ရာထူးတွေ မပေးခဲ့တာဟာ လူမျိုးစုတိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့ အန်အယ်လ်ဒီ အပေါ် ယုံကြည်မှုလျော့ကျစေခဲ့တဲ့ အချက်ဖြစ်နေသလို ဦးနု၊ ဦးနေ၀င်း အစိုးရတွေနဲ့ အန်အယ်လ်ဒီရဲ့ စဉ်းစားပုံ မကွာဘူးဆိုတဲ့ ဝေဖန်ချက်ကလည်း ရှိနေပါတယ်။
ပင်လုံလို့ ပြောလိုက်ရင် ခွဲထွက်ခွင့်လို့ ပြေးမြင်ကြပေမဲ့ တကယ်တော့ ခွဲထွက်ခြင်းမခွဲထွက်ခြင်းက တိုင်းရင်းသားတွေ သက်သောင့်သက်သာနဲ့ စိတ်ပိုင်း ၊ရုပ်ပိုင်း လုံခြုံမှု ရှိခြင်း မရှိခြင်းဆိုတဲ့ အချက်တွေအပေါ်မှာသာ မူတည်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အခြေခံ ဥပဒေအရ ခွဲထွက် ခွင့်ပေးဖူးတာ မြန်မာနဲ့ ဆိုဗီယက်နှစ်နိုင်ငံထဲရှိဖူးတယ် ဆိုပေမဲ့ ဆိုဗီယက်က နယ်မြေတွေကို သိမ်းပိုက်ရင်းစုစည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး မြန်မာရဲ့ ပြည်ထောင်စုအဖြစ် ဦးတည်တဲ့အနေထားကတော့ လွတ်လပ်စွာမိမိဆန္ဒ အရ လေးပြည်ထောင် ပူးပေါင်းခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ အတူယှာဉ်တွဲနေထိုင်ရေး ဖက်ဒရာယ်လစ်ဇင် Coming Together ကနေလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ အခုလုပ်ဖို့ စီစဉ်နေတဲ့ ညီလာခံက သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် လက် ထက် က လုပ်ခဲ့တဲ့ ညီလာခံရဲ့အဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ သာမန်ဖြေလျှော့ မှုလောက် ပဲ အရင်သွားမယ်ဆိုရင် တခြားနာမည်နဲ့ သုံးပြီးပေါ့ပေါ့ပါး ပါးဆွေးနွေး တာကောင်းပါတယ်။ ပင်လုံ နာမည်ပါနေတော့ ကြီးကျယ်လွန်း အားကြီးပါ တယ်။ နောက်မှသာ ပြည်ထောင်စု ပုံစံအတွက် ဆက်ဆွေးနွေး သွားတဲ့ ပုံစံမျိုးပါ။
ပင်လုံနာမည်သုံးမယ်ဆိုရင်လည်း ပင်လုံနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ အဆင့်တန်း ရှိရမှာဖြစ် ပါတယ်။ ပင်လုံလို့နာမည်သုံးတဲ့အတွက် တင်ပြတောင်းဆိုသူတွေကလည်း ရဲရဲတင်းတင်းနဲ့ တောင်းဆိုလာနိုင်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံမှာ တပ်မတော်က ပြောတဲ့ ဖက်ဒရာယ်အဆင့်တန်းပုံစံနဲ့ တိုင်းရင်း သား လက်နက်ကိုင်တွေဘက်က တင်ပြတဲ့ ပုံစံအဆင့်တန်း က တော်တော် ကွာဟတာပါ။ အရေးတကြီးလိုနေတာက အန်အယ်လ်ဒီအနေနဲ့ ဖက်ဒရာယ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ နှစ်ဘက်လက်ခံနိုင်တဲ့ ကြားကြတဲ့ စာတမ်းတွေ ရှိနေဖို့လိုနေတာ ပကတိအခြေနေပါ။
ချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင် ပင်လုံစာချုပ်ဟာ နိုင်ငံရဲ့ နှစ်ပေါင်းထောင်နဲ့ချီ သမိုင်းအတွင်း ပထမဆုံး ရရှိထားတဲ့ ပြည်ထောင်စုထူထောင်မှုအတွက် တိုင်းပြည်အတွင်းက ခေါင်းဆောင်တွေအားလုံး စိတ်တူကိုယ်တူနဲ့ ချုပ်ဆိုထားတဲ့ ပြည်ထောင်စု ပဋိဥာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ အင်မတန်ကြီးကျယ်ပါတယ်။ လက်ရှိ အာဏာရ အန်အယ်လ်ဒီ အစိုးရအနေနဲ့ ပါတီ သက်တမ်းတလျှောက် ၊ မဲဆွယ်ခဲ့မှုတလျှောက် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ပုံနဲ့ မဲဆွယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ပြပြီး ပြည်ထောင်စုပဋိဥာဉ်ကို လိုက်နာမှုမရှိ ၊ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ လမ်းစဉ်ကို ရိုက်ချိုးပြီး အသစ် ထပ်မံ အကောင်ထည်ဖော်ဖို့ စဉ်းစားတာ ကောင်းမကောင်းဆိုတာကလည်း စဉ်းစားစရာကိစ္စပါပဲ။
ပင်လုံ ပြည်ထောင်စု ပဋိဥာဉ်နဲ့ လွတ်လပ်ရေးကြေငြာစာ တမ်းပါ ပြဌာန်း ချက်တွေဆိုတာ အရပ်သားအစိုးရအနေနဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူဖောက် ဖျက် လို့ကောင်းတဲ့ အရာမဟုတ်သလို တစ်နေ့မှာ အဲဒီပြည်ထောင်စု ပန်းတိုင် ဆိုတာ မဖြစ်မနေသွားရမဲ့ အရာပါ။ တဘက်မှာလည်း ပင်လုံစာချုပ်ဟာ တိုင်းရင်းသားပြည်သူအားလုံး တန်းတူရည်တူ နဲ့ ပြည်ထောင်စုကို ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း သက်သေပြတဲ့ ပဋိဥာဉ်လည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
( ဆောင်းပါးရှင် - စိုင်းထွန်းအောင်လွင်)
Posted by myu shadan at 3:54 PM No comments:
ကချင်နိုင်ငံတော်ကို ဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲ (စ-ဆုံး)
(1) ဘုရားကျောင်းကနေ စလုပ်ရမယ်။
ဒီနေ့ ကချင်တွေ ဟာ ခရစ်ယာန်များပါတယ်။ စစ်ဘဲတိုက်မယ်ဆိုရင် နှစ်ဖက်လုံး အထိ နာကြမှာ အမှန်ပဲ။ ဒီနေ့ အသင်းတော်တွေဟာ ဘုရားကြောင်း ပြိုင်ဆောက်နေကြတယ်။ ကချင်လူမျိုးကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ အဖွဲ့အစည်းဆိုတာ တော်တော်ရှားတယ်။ ကချင်လူငယ်တွေကို ပြုစုပျိုးထောင်တာ အင်မတန်နည်းတယ်။ ဘုရားကျောင်းဆောက်ဖို့ အလျှူငွေတွေ မတရားကောက်တယ်။
တကယ်လို့ ဘုရားကျောင်းဆောက်မယ့် အလျှူငွေတွေကိုလူသားအရင်းအမြစ်တည်ထောင်ရာမှာ အထောက်အကူပြုမှာပါပဲ။ အခုလောလောဆယ် ကချင် လူမျိုးတွေမှာ လူသားအရင်းအမြစ်မရှိသေးပါဘူး။
ဘယ်အသင်းတော်ရဲ့ ဘုရားကျောင်းက ဘယ်လောက်တန်တယ်ဘဲ လိုက်ပြိုင်နေကြတယ်။ ဘယ် အသင်းတော်က လူတော် ဘယ်လောက် မွေးထုတ်ပေးလိုက်ပြီ ဆိုတာ မပြိုင်ကြဘူး။
ကချင်လူမျိုးတွေ တိုးတက်ဖို့ဆိုရင် ကချင် အားလုံးဟာ ပညာတတ်ဖြစ်ရပါမယ်။ KIA/KIO က အခု စစ်တိုက်နေတယ်။ ကချင်တစ်မျိုးသားလုံးရဲ့ အခြေခံ၊ လူသားအရင်းအမြစ်တွေကို ပြုစုပျိုးထောင် ဖို့က ခရစ်ယာန်အသင်းတော်များရဲ့ တာဝန်သာဖြစ်ပါကြောင်း ရေးသားအပ်ပါတယ်။
KIO/KIA ရဲ့ မူကို ပြောင်းလဲရပါမယ်။
အရင်တုန်းကဆို ကချင်လူငယ်တွေ စီးပွားရှာရတာမလွယ်ပါဘူး။ စုဆောင်းရေးခေါ် ပါတယ်။ ဥပမာ ရွှေ မော်၊ ကျောက်စိမ်းလုပ်ကွက်၊ ပယင်းမော်၊ ကျွန်းသစ်လုပ်ကွက် စသည် ဘယ်နေရာမှာ မဆို ကချင်လူငယ်တွေကို သိပ်ပြီး မတွေ့ရပါဘူး။
ကျနော် ဖားကန့်ရောက်သွားတော့ ကုမ္ပဏီ တွေက အသိတွေကို ကချင်လူငယ်တွေ အလုပ်လာလုပ်ကြလား မေးကြည့်တော့ မရှိသလောက်ပါပဲတဲ့။ နယ်ခံတွေဖြစ်ပြီး ဝင်မလုပ်ကြတာကို သူကိုယ်တိုင် အံသြပါတယ်တဲ့။
ကချင်လူငယ်တွေကို စီးပွားရေးလုပ်ဖို့ ဘာကတားမြစ်နေတာလဲ။ KIO/KIA ကလည်း တစိတ်တဒေသ ပါဝင်နေပါတယ်။.ဒါကလည်း သတိချပ်ဖို့ပါ။ ကချင်ဒေသက စီးပွားရေးတွေမှာ ကချင်လူငယ်တွေ ကိုယ်စား တခြားလူမျိုးတွေက အစားထိုးသွားပါတယ်။ အဓိက ကဗမာလူမျိုးတွေ ကချင်ပြည်နယ်ကို အများကြီး ဝင်ရောက်လာပါတယ်။
အဓိက ပြောချင်တာကဗျား၊ ကချင်လူငယ်တွေရဲ့ တက်လမ်းကို မပိတ်ထားမိဖို့ပါ။ အစိုးရကိုတော့ မဝေဖန်ချင်တော့ဘူး။ အစိုးရဝန်ထမ်းဆိုတာ ကချင်ပြည်သူတွေနဲ့ မဆိုင်သလိုပါဘဲ။ အားလုံးကို မသိမသာ ပထုတ်ထားကြပါတယ်။ ဒါက အာလုံး အသိပါ။ ဒါကြောင့် ဆက်မရေးတော့ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ကချင်နိုင်တော်တည်ဆောက်ရေး ရေးနေတာကိုး။
KIA/KIO အနေနဲ့ လူငယ်တွေကို ပိုပြီး ပြုစုပျိုးထောင် သင့်ပါတယ်။ ကချင်တမျိုးသားလုံး စာတတ်မှ စီပွားရေးအဆင်ပြေမှ ကချင်နိုင်ငံတော်ကို တည်ထောင်နိုင်မှာပါ။ ကချင်လူငယ်တွေကို ပိုပြီး လမ်းပြဖို့ပါ။ ဝမ်းတထွာအတွက် ကိုယ့်ကချင် လူမျိုးခြင်း မနှိမ်သင့်တော့ပါဘူး။
KIO/KIA အနေနဲ့ ကချင်လူငယ်တွေရဲ့ အရင်းအမြစ်ကို ပျိုးထောင်သင့်ပါတယ်။ လမ်းစဉ်တွေရော ချမှတ်သင့်ပါတယ်။ ပိုပြီးတော့ ချမှတ်ဖို့ လိုလာပါပြီ။ KIO/KIA အနေနဲ့ကချင်တမျိုးသားလုံးအတွက် ရပ်တည်နေတာမှန်ရင် လူငယ်တွေရဲ့ လူသားအရင်းအမြစ်ကို ပျိုးထောင် သင့်ပါတယ်။
ကချင်တမျိုးသားလုံးရဲ့ အနာဂတ်သည် ကချင်လူငယ်များရဲ့ လက်ထဲတွေ ဖြစ်တယ်။
ကချင်လူငယ် ပညာတတ်တွေ ဘယ်လောက်များလဲ။
ကချင်လူငယ်ပညာတတ်တွေ အင်မတန်နည်းနေပါသေးတယ်။ ကျနော့်စာတောက်လျောက် လူငယ်တွေရဲ့ ပညာရေးကို ကချင်တမျိုးသားလုံးရဲ့ လူ့အရင်းအမြစ်ကို ဘယ်လို ပျိုးထောင်မလဲ။ အခုအပိုင်း (3) မှာ ပညာရေးပြောပါမယ်။ ဒါကလည်း ထူထောင်သင့်တဲ့ အရင်းအမြစ်မှာ တစ်ခုအပါအဝင် ဖြစ်ပါတယ်။
ကချင်လူမျိုးတွေ စာပေမှာ အားနည်းကြပါတယ်။ မြို့တွေမှာ ရောက်နေတဲ့ လက်တစ်စုပ်စာ ကချင် လူမျိုးလောက်တာ စာတတ်ကြပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လူသားအရင်းအမြစ် ထူထောင်ရာမှာ အင်မတန် အားနည်းကြပါတယ်။
ကချင်လူမျိုးတွေရဲ့ လူသားအရင်းအမြစ်ကို ထူထောင်ဖို့လည်း ကချင်လူမျိုးများဟာ မစည်းလုံး ကြပါဘူး။ ဘာကြောင့်မစည်းလုံးသလဲလို့ အရင်းအမြစ်ကို ရှာလိုက်တော့ ခရစ်ယာန်ဘာသာတွေ ကွဲပြားနေကြရပါတယ်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာတွေများလွန်းလို့ ရေတွက်ရမှာတောင် ခက်ခဲပါတယ်။
ဒီလိုမျိုး အကွဲကွဲအပြားပြားဖြစ်နေတာ KIO/KIA မှာ သာမက ကချင်ပြည်သူ အချင်းချင်းတောင် ကွဲပြားစေပါတယ်။ ဒါက ကချင် လူမျိူးတွေကို အင်းအားနည်းစေတဲ့ အဓိက အကြာင်းရင်း ဖြစ်နေပါတယ်။
အဓိက ပြသာနာက ဘာသာရေးမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကျနော်တို့ ရင်ထဲမှာ မမှတ်ထားခဲ့ကြဘူး။ အခုကျနော်တို့ ရင်ဆိုင်နေတာက ကချင်ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်က နိုင်ငံရေးပြသာနာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကချင်လူမျိုးတွေမှာ ပညာတတ် အများကြီးရှိတယ်ဘဲ ထားအုံး။ ပညာတတ်တွေကို အလုပ်ပေးဖို့ နေရာမရှိပါဘူး။ ပညာတတ်ရင်တောင် အလုပ်မရှိတဲ့ လူပိုတွေ ဖြစ်နေရတယ်။ ကြာရင် အလုပ်မရှိတဲ့ လူက ပျက်စီးရတယ်။
ပိုက်ဆံချမ်းသာတဲ့ လူတစုရဲ့ သားသမီးတွေသာ အလုပ်ရကြတယ်။ ပြီးတော့ ပညာကောင်းကောင်းသင်နိုင်ကြတယ်။ နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်အထိ သွားရကြတယ်။ စစ်ဘေးကြုံတော့လည်း လူချမ်းသာကချင်လက်တစုပ်စာက နိုင်ငံခြားကိုပြေးတယ်။ ရန်ကုန်ကို ပြေးတယ်။ တချို့ကြပြန်တော့ ဒုက္ခသည် အနေနဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ ခိုလုံသွားကြတယ်။
ပညာတတ်တချို့ကလည်း ဝမ်းရေးဖူလုံဖို့ အတွက် နိုင်ငံခြားကို ထွက်ခွာသွားကြရတယ်။
နိုင်ငံ့အတွက် စစ်တိုက်တာက ဆင်းရဲသားတွေ၊ ကိုယ့်လူမျိုးအတွက် မားမားရပ်တည်နေတာက ဆင်းရဲသားတွေပဲ ဖြစ်နေတယ်။
KIO/KIA ခရိုနီနဲ့ ကိုယ့်ဝမ်းတထွာအတွက် စီးပွားရှာနေတဲ့ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေလည်း အသိတရားရဖို့ သင့်ပါပြီ။
နိဂုံးချုပ်ပြောရရင် ကျနော်တို့ ကချင်လူမျိုးတွေ ဘယ်လို စည်းလုံးကြမယ်။ အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေ ဘယ်လို တည်ဆောက်ကြမယ်။ စစ်ပဲတိုက်နေတာဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အဖြေမဟုတ်ဘူး။ အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ တမျိုးသားလုံးပညာတတ်ရေး၊ အခြေခံအဆောက်အဦးတွေ၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေကို ဘယ်လို တည်ဆောက်သွားမလဲဆိုတာ ပိုပြီးစဉ်းစားသင့်တယ်လို့ ရေးသားအပ်ပါတယ်။
ဆယ်ကျပ်တန်သူကို တစ်ကျပ်နဲ့ ရအောင်ခိုင်းတယ်
ကချင်လူ့အဖွဲ့အစည်း(KIO/KIA မပါ)မှာ အလုပ်သွားလုပ်တဲ့ လူငယ်တချို့ညီးသံ ကြားဖူး ပါတယ်။ ပေးတာက တစ်ကျပ်ဖိုး ခိုင်းတာက ဆယ်ကျပ်လောက်ခိုင်းချင်ကြတယ်။ ပြီးတော့ လူမျိုးရေး (Myusha lam) ဆိုပြီး လုပ်အားပေးခိုင်းတတ်ကြတယ်။ ရေနွေးကြမ်း ထည့်ခိုင်းသည် အထိ။ ကချင်လူမျိုးတွေကို ချိုးနိမ်နေတာက ကချင်လူမျိုးဘဲ ဖြစ်နေတယ်။
ဒါကြောင့် ကချင်လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ အလုပ်မလုပ်ချင်ကြဘူး။ ကချင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲ။ ကချင်လူငယ်တွေဆိုရင် အလုပ်ကိုပိုခိုင်းချင်တယ် လူငယ်တွေက မလုပ်နိုင်တော့ လူငယ်တွေကို ပျင်းတယ် ဆိုပြီး နောက်ပိုင်းပြန်မသုံးတော့ဘူး။ ဒါက ဘယ်သူ့ကို အပြစ်တင်မလဲ။
ကိုယ့်လူမျိုးကိုဘဲ အလုပ်ပေးပါလို့တော့ မဆိုလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အလုပ်ခိုင်းတဲ့ ပုံစံတွေ ပြောင်းသင့်ပါကြောင်းပါ။
ပြီးတော့ ကချင်အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းတွေ ခဏတာ အင်းအားရှိပြီး နောက်ပိုင်းပျောက်ကွယ်သွားကြတယ်။ မပျောက်ကွယ်ရင်တောင် မိန်သွားကြတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ။
အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းမှာ ဝင်ငွေမရှိပါဘူး။ ပြီးတော့ အဖွဲ့ဝင်တွေလည်း အကုန်လုံး လုပ်အားပေးပါပဲ။ ဒီအဖွဲ့အစည်းကို ဘယ်လို ခိုင်မာအောင်တည်ဆောက်မလဲ မစဉ်းစားဘူး။
ဟုတ်ပါတယ်။ တခါလုပ်အားပေးနိုင်ပေမယ့် ကချင်လူမျိုးတော်တော်များဟာ ဆင်းရဲကြပါတယ်။ တခါလုပ်အားပေးနိုင်ပေမယ့် နောက်တခါလုပ်အားပေးနိုင်ဖို့ ခက်ကြပါတယ်။ ပြီးတော့ ကချင်လူငယ်တွေကို လူမျိုးရေးနဲ့ ဆွဲထားတယ်။ တန်ရာတန်ကြေးမပေးဘူး။လူမျိုးရေးဟုတ်တယ် လုပ်အားပေးရမယ်။ ခေါင်းစဉ် ကဒါဘဲ။
တန်ရာတန်ကြေးနဲ့ခိုင်းကြပါ။ ကိုယ့်လူမျိုးကို ကိုယ်မပြုစုမပျိုးထောင်ရင် ဘယ်လူမျိုးက တာဝန်ယူမလဲ။ လူမျိုးရေးနဲ့ ကချင်လူငယ်တွေရဲ့ တက်လမ်းကို မပိတ်စေချင်ပါဘူး။ မပိတ်သင့်ပါဘူး။
တစ်ကျပ်တန်တဲ့ သူကိုတောင် ဆယ်ကျပ်လောက်တန်အောင်ပျိုးထောင်ပြီး ခိုင်းပါ။ ဒါဆို ကချင်လူမျိုးဟာ နောင်တချိန် လူ့အရင်းအမြစ် တိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံဖြစ်မှာပါ။
အပိုင်း (5) နိဂုံး
ကချင်မျိုးနွယ်စုတွေရဲ့ အင်အားကို လျှော့မတွက်သင့်ပါဘူး။ ပိုပြီး အင်အားကြီးအောင် လုပ်သင့်ပါတယ်။
ဒီနေ့ကချင်မျိုးနွယ်စုတွေကို သွေးခွဲနေတာ ရှိပါတယ်။ ရဝမ်တွေကို ဗမာဖြူလို့ မည့်ပြီး သွေးခွဲတယ်။ လီဆူးတွေကို ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးမည်ဟု သွေးခွဲတယ်။
ဒါကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကချင်လူမျိုးတွေရဲ့ အင်အားကို စစ်အစိုးရသိနေတာ သိသာပါတယ်။ အဓိကအင်အားကို ဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲ စဉ်းစားဖို့ အချိန်တန်ပါပြီ။ ပါဝင်လာလိမ့်မယ် ဆိုတဲ့ အတွေးလောက်နဲ့တော့ အလုပ်မဖြစ်တော့ပါဘူး။ အမှန်တကယ်စဉ်းစားတွေးခေါ် ဖို့ အချိန်တန်ပါပြီ။
ကချင်မျိုးနွယ်စုတွေထဲမှာ ပညာတတ်ဘယ်လောက်ရှိသလဲ၊ အရင်ဖော်ထုတ်မယ်။
ပညာတတ်တွေကို ဘယ်လိုအသုံးပြုမယ်ဆိုတာ Plan ဆွဲမယ်။ ပြီးတော့ Plan အတိုင်း အကောင်အထည်ဖော်မယ်။
ထိုPlan ကို ဘယ်နှစ်နှစ် စီမံကိန်းချမလဲ။ နှစ်ပေါင်း (30) လား။ (50) လား။
ကျနော်အခုချိန်ထိ ကချင်တွေရဲ့ ပါးစပ်ဖျားမှာ နှစ်ပေါင်း (30,50,60) စီမံကိန်းလည်းမကြားဖူးပါဘူး။ ထိုသို့ ပြော၍ အထင်သေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်အားနည်းချက်ကို သိတာဟာ ရှက်စရာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်အားနည်းချက်ကို မသိခြင်းကဘဲ ရှက်စရာ ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး နှစ်ပေါင်း (60) ဖြေရှင်းလာတာ အဆင်မပြေပါဘူး။ ဒါက နည်းလမ်းအသစ်တွေ လုပ်သင့်ပြီဆိုတဲ့ ခေါင်လောင်းသံလေးပါ။ ကြားတတ်ဖို့သာ လိုပါတယ်။
စင်ကာပူနိုင်ငံကို တည်ထောင်ဖို့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ ဘယ်နှနှစ်စီမံကိန်းချရတယ်ဆိုတာ သိပါသလား။
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံလို ဖွံဖြိုးတိုးတက်ဖို့ ဘယ်လောက်ကြာသလဲ။
ကချင်လူမျိုးတွေရဲ့ လူ့အရင်းအမြစ်ကို တည်ထောင်ဖို့ ဘယ်နှစ်နှစ် ကြာမလဲ။ Plan ဆွဲပြီး လုပ်ငန်းစလုပ် သင့်ပြီထင်ပါတယ်။
ကိုယ်မှာ လူ့အရင်းအမြစ်မရှိရင် ခွဲထွက်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်(ခွဲထွက်ဖို့ လူ့အရင်းအမြစ်သိပ် မရှိသေး)၊ ဖက်ဒရယ်အရ 21 ရာစု ပင်လုံမှာ ပူပေါင်းတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် သူများလက်အောက်မှာ နေရဖို့က များပါတယ်။ လွတ်တော်ထဲက ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးလို လူရီစရာ ဖြစ်နေအုံး မှာပါ။
(အပိုင်း (5) ပိုင်းထိ ရေးသွားတော့ ကချင်လူမျိုးတွေအတွက် အတွေးတခု ဒါမှမဟုတ် ဘယ်ကစလုပ်မယ်ဆိုတာ အတွေးပေါက်လောက်ပြီ ထင်ပါတယ်။ ကချင်လူမျိုးကို တကယ်ချစ်ရင် Plan ဆွဲ၍ နိုင်ငံတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်သင့်ပါကြောင်း ရေးသားအပ်ပါတယ်။
သင့်လူမျိုးကို ဘယ်သူမှ အနိုင်မကျင့်၊
ဘယ်သူမှ သင်တို့ ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ သင်တို့ သံယံဇာတတွေကို ယူဆောင်သွား၍ မရ။)
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ အတွေးပွားဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ share နိုင်ပါတယ်။
(Myusha gintawng @ အမှန်အတိုင်း ဝေဖန်မည်။ )
စာရေးသူ၏ facebook link
Posted by myu shadan at 5:31 PM No comments:
အိမ်ထောင်ရှင်မမတွေရော အိမ်ထောင်ရှင်မလောင်းတွေရောဖတ်ရအောင်လို့ဖတ်မိတဲ့စာလေး ကြိုးစားဘာသာပြန်ထားပါတယ်
၁-ကိုယ့်ခင်ပွန်းကိုဘယ်တော့မှမဟောက်ပါနဲ့ သူ့ကိုမရိုသေခြင်းလက္ခဏာပါ (သုတ္တံ ၁၅:၁)
၂-ကိုယ့်ခင်ပွန်းရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုမိသားစုဝင်/သူငယ်ချင်းတွေကိုမပြောပြပါနဲ့ တစ်နေ့ကိုယ့်ဆီပြန်လာပါလိမ့်မယ် လင်မယားဆိုတာတစ်ဦးအကြောင်းတစ်ဦးထိန်းသိမ်းဖို့ပါ (ဧဖက် ၅:၁၂)
၃-အမူအရာအစောင်းအမြောင်းတွေနဲ့ ကိုယ့်ခင်ပွန်းကိုမဆက်ဆံပါနဲ့ သူဘယ်လိုအထာကောက်သွားမလဲဆိုတာမသိနိင်ဘူး အမြဲတမ်းပြန်ခံပြောတက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာပျော်ရွှင်တဲ့အိမ်ကိုမပိုင်ဆိုင်ကြဘူး (သုတ္တံ ၁၅:၁၃)
၄-ကိုယ့်ခင်ပွန်းကိုတခြားယောက်ကျားတွေနဲ့မနှိုင်းယှဉ်ပါနဲ့ သူတို့ရဲ့ဘဝအခြေအနေအားလုံးကိုကိုယ်မသိနိုင်ပါဘူး ခင်ပွန်းသည်ရဲ့မာန သိက္ခာကိုစော်ကားမိရင် ကိုယ့်အပေါ်သူထားတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာလည်းလျေ့ာနည်းသွားပါလိမ့်မယ်
၅- ခင်ပွန်းရဲ့သူငယ်ချင်းတွေကို မကြိုက်လို့ဆိုတိုင်းမလေးမစားမဆက်ဆံပါနဲ့ သူတို့တွေကိုရှောင်ဖယ်အောင်သင့်ခင်ပွန်းပဲလုပ်သင့်ပါတယ် (သုတ္တံ ၁၁:၂၂)
၆- ခင်ပွန်းသည်လက်ထပ်ထားတာဟာသင့်ကိုပါ အိမ်အကူကိုမဟုတ်ဘူးတခြားသူကိုမဟုတ်ဘူး အိမ်ရှင်မတာဝန်ကိုယ်ဆောင်ရွက်ပါ(ကမ္ဘာဦး ၂:၂၄)
၇-သင့်ခင်ပွန်းကိုဂရုစိုက်ရမဲ့တာဝန်ကိုတခြားသူကိုမပေးပါနဲ့ ကိုယ့်ခင်ပွန်းဟာ ဇနီးသည်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်(ဧဖက်၅:၃၃)
၈-ခင်ပွန်းသည်အိမ်ကိုလက်ချည်းသက်သက်နဲ့ပြန်လာခဲ့ရင်အပြစ်မတင်ပါနဲ့ အားပေးပါ (တရားဟော၃:၂၈)
၁၀- ခင်ပွန်းရဲ့သွေးသားဆန္ဒမဖြည့်ဆည်းပေးချင်လို့နေမကောင်းချင်ယောင်ဆောင်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ သူ့အလိုလိုက်လျောပါ တခြားတစ်ယောက်သင့်နေရာမယူပါစေနဲ့ ယောက်ကျားတိုင်း(ရွေးကောက်ခံလူအပါအဝင်)သွေးသားဆာလောင်မှုကိုကြာကြာမခံစားနိင်ကြပါဘူး (ရှောလမုန်၇:၁၂)
၁၁-ခင်ပွန်းသည်ကိုရည်းစားဟောင်းသို့မဟုတ်တွဲဖူးခဲ့သူတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ခြင်းလုံးဝပလုပ်ပါနဲ့ သင့်ရဲ့အိမ်အဖက်ဆည်မရဖြစ်သွားပါလိမ်မယ်(ရှောလမုန် ၅:၉)
၁၂-အများရှေ့မှာခင်ပွန်းကိုယ်စားဖြေကြားခြင်းမပြုပါနဲ့ သူ့ဟာသူကိုယ်တွယ်ဖြေရှင်းပါစေ သင့်ကိုယ်စားတော့သူဖြေပေးနိင်ပါတယ် (သုတ္တံ၃၁:၂၃)
၁၆-ရေချိုးခန်းနဲ့မှန်တင်ခုံရှေ့မှာမလောပါနဲ့ (အချိန်ယူသင့်သလာက်ယူပြီးပြင်ပြင်ဆင်ဆင်နေပါ) အပြင်မှာ လှလှပပဖြစ်ဖို့အချိန်ပေးထားသူတွေသင့်ခင်ပွန်းဘေးမှာဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတက်လို့ပါ(၁ဓမ္မရာဇဝင်၂၅:၃)
၁၇-သင့်မိဘမိသားစုဝင်နဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာသင့်အိမ်ထောင်ရေးအဆုံးအဖြတ်မပေးနိင်ပါဘူး အချိန်ကုန်ခံမေးမနေပါနဲ့ ကိုယ်တိုင်ပြတ်သား ဆုံးဖြတ်ပါ (လု၂၁:၁၆)
၂၂-ပျင်းရိတဲ့ဇနီးဟာဂရုမစိုက်တဲ့ဇနီးပါပဲ ကိုယ်ရေချိုးဖို့တောင်မေ့နေတက်သူမျိုးပေါ(သုတ္တံ၂၄:၂၇/ ၂၀:၁၃)
၂၃-မယ်မယ်ရရချက်ကျွှေးပါ အစားအသောက်ကိုပေါ့ပျက်ပျက်သဘောထားတဲ့ယောက်ကျားမရှိပါဘူး(သုတ္တံ ၃၁:၁၄)
၂၅- ခင်ပွန်းသည်အပါအဝင်အိမ်ကိုလာတဲ့သူတိုင်းကိုရေပူရေအေးကမ်းပြီးကြိုဆိုပါ ချိုသာတဲ့စရိုက်ဟာစစ်မှန်တဲ့အလှတစ်ပါးပါ(သုတ္တံ၃၁:၁၁)
၂၈-ရင်သွေးတွေဟာဘုရားဆီကလာတဲ့ကောင်းချီးတွေဖြစ်တယ် ချစ်ခင်ပါကောင်းမွန်စွာသင်ပြပေးပါ (သုတ္တံ၂၂:၆)
၃၀-ဆုတောင်းခြင်းအားကြီးတဲ့ဇနီးဟာသာလွန်ပြင်ဆင်တဲ့ဇနီးဖြစ်တယ် အဲဒါကြောင့်ခင်ပွန်းအတွက်အိမ်ထောင်အတွက်အမြဲဆုတောင်းပါ (၁သက်၅:၁၇)
Posted by myu shadan at 11:10 PM No comments:
ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာ ဆရာဟာ ကျောင်းသား ၅၀ ခန့်ကို ဘောလုံးတစ်ယောက် တစ်လုံးစီ ဝေလိုက်တယ်။
ပြီးတော့ ဘောလုံးတွေမှာ ကိုယ့်နာမည်ကို ရေးခိုင်းတယ်။
ရေးပြီးသွားတဲ့အခါ ကျောင်းသားတွေ အားလုံးကို အခန်းထဲမှာ ဘောလုံးတွေထားခဲ့ခိုင်းပြီးတော့ အပြင်ခဏထွက်စေတယ်။
ဆရာက စိတ်ကြိုက် ဘောလုံးတွေကို နေရာ ရွှေ့ပြီးတဲ့အခါကျမှ ပြန်ဝင်လာခိုင်းပြီး ကိုယ့်နာမည်ပါတဲ့ ဘောလုံးလေးတွေကို ပြန်ရှာစေတယ်။
ဒီအခါမှာ ကျောင်းသား ၅၀ လုံးဟာ တိုးကာဝှေ့ကာ ချွေးသံတရွှဲရွှဲနဲ့ အလုအယက် ကိုယ့်နာမည်ပါတဲ့ ဘောလုံးကို ပြန်လိုက်ရှာတာပေါ့။
ငါးမိနစ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာ အားလုံးကိုရှာတာရပ်ခိုင်းလိုက်တယ်။ တစ်ယောက်မှ ကိုယ့်ဘောလုံး ကို ကိုယ်ပြန်မရသေးဘူး။
ဒီတော့မှ ဆရာက တပည့်တွေကို ပြောတယ်။ "မိမိနီးစပ်ရာဘောလုံးတစ်လုံးကိုသာ ယူပြီးတော့ နာမည်ပိုင်ရှင်တွေကို ရှာပေးကြည့်ပါ" တဲ့။
ဆရာပြောတဲ့အတိုင်း ကျောင်းသားတွေ လိုက်လုပ်တဲ့အခါ ကျတော့မှ မိနစ်ပိုင်းအတွင်း ကျောင်းသားတွေ ဆီကို ကိုယ့်နာမည်ပါတဲ့ ဘောလုံးတွေ ပြန်ရောက်လာတယ်။
ဒီတော့မှ ဆရာက "တပည့်တို့ ဘဝမှာ ပျော်ရွှင်မှုကိုရှာတာဟာ အခု လေ့ကျင့်ခန်းလေးနဲ့ အလား သဏ္ဍာန် တူတယ်။ လူတွေ ဟာ ကိုယ့်ပျော်ရွှင်မှုဆိုတဲ့ နောက်ကိုပဲ ချွေးတဒီးဒီး ကျအောင် လိုက်ရှာ နေလေ့ ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာ ပျော်ရွှင်မှု စစ်စစ်ကို တွေ့သလား ဆိုတော့ မတွေ့တတ်ဘူး။ တကယ် ပျော်ရွှင်မှု စစ်စစ်ကို ရလိုရင် ကိုယ်လက်လှမ်းမီရာ သူတစ်ပါး ပျော်ရွှင်မှု လေးတွေကို ဖြည့်ဆည်း ပေးကြည့်ပါ။ သူတစ်ပါး ကလဲ ကိုယ့် ပျော်ရွှင်မှု ဘောလုံးလေးကို ကိုယ့်ဆီကို အရောက် လာပေး ပါလိမ့်မယ်။"
Posted by myu shadan at 4:55 PM No comments:
"ခွဲရေး တွဲရေး အသဲပေးပြီး ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြည့်ချင်"
ကချင်ပြည်သူတွေ ကို သေနတ်ပြောင်းဝတွေနဲ့ ချိန်ထားတဲ့ မြန်မာလူမျိုး အများစုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းသစ်များရဲ့ အကျိုးစီးပွားကာကွယ်စောင့်ရှောက်သော သက်ပြည့်လွန်ပင်စင်မသွားဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ တပ်မတော်ကြီးဟာ တမျိုးသားလုံးသာ မက လူသားမျိုးနွယ်စုအားလုံးရဲ့ အန္တရာယ်ဖြစ်တဲ့ ဘိန်းခင်းကြီးတွေ ကို ဖျက်ဆီးဖို့ သွားခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အခါမှာ (မောထှာ၊ ပြောစရာတွေ များလို့ ပါအောင် ထည့်နေရတာပါ) ကချင်ပြည်သူတွေဟာ ပျော်ရွှင်စွာ နဲ့ ရိုးရာသီချင်းတွေ ဆိုပြီး ဘိန်ူခင်းတွေဆီ ထွက်ခွာသွားတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းကို ဖတ်ရ၊ မြင်ရတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိရသဗျာ။
ကိုယ့်ဒုက္ခပေးနေတဲ့ ကျားဆိုး နှိမ်နှင်းမယ်ဆိုတာတောင် ခွင့်ပြုချက်ရပါမှ တဲ့လား။
ကြည့်ပါဦး၊ ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးအကြီးဆုံး ကျောက်စိမ်းထွက်တဲ့ ဒေသသားကြီးတွေလေ၊ ဆင်းရဲလိုက်ကြတာများ။ လူငယ်အများစုဟာလည်း အရွယ်ရောက်လာတာနဲ့ ဘာမှ မျှော်လင့်ချက်မရှိ၊ တက်လမ်းမရှိတဲ့ တိုင်းပြည်မှာ စိတ်တွေလေပြီး ဘိန်းတွေစွဲ သေပွဲတွေ ဝင်ကြ၊ တခုတည်းသောထွက်ပေါက်က နာကြည်းမှုတွေနဲ့ လက်နက်ကိုင်ဆွဲ တိုက်ကြ ခိုက်ကြ။ ဆိုးသံသရာကြီး ထဲ လည်မဆုံးဖြစ်နေလိုက်တာ။
မကြာသေးမီက တရုတ်ပြည်မှာ ပြုလုပ်တဲ့ မနောပွဲဟာ ဂင်းနစ်စံချိန်တွေ ဝင်လို့တဲ့ ကချင် ကျား မ မဟူ ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ တင်ကြ၊ ရှယ်ကြပြန်တယ်။
အောင်လ လို လက်ဝှေ့ကျော်တွေကလည်း ကချင်လူမျိုးတွေ ဂုဏ်ကို ဆောင်ပြန်တယ်။
ကချင်တွေလေ ၁၉၄၈ ကတည်းက ပင်လုံစာချုပ်နဲ့ မြန်မာတွေနဲ့ ပူးပေါင်းဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကတည်းက ဆင်းရဲ လိုက်ရတာမှ ဆင်းရဲ လိုက်ရတာ။
အဖိနှိပ် အညှင်းဆဲ ခံလိုက်ရတာလည်း မပြောပါနဲ့တော့။ ကချင်တွေ၊ ကယားတွေ၊ ချင်း၊ ရခိုင်တွေ ရဲ့ အဖြစ်ဟာ ဆိုဗီယက်ယူနီယမ်ကြီး ထဲ ပါလာရတဲ့ ယူကရိမ်းတွေ၊ အဇာဘိုင်ဂျန်တွေ လိုပဲ လို့ ကျနော် ကဖြင့် မြင်မိပါတယ်။
ဇာဘုရင် လက်ထက်က သမိုင်းကြွင်းကျန်ရယ်၊ မဟာအောက်တိုဘာတော်လှန်ရေးအောင်မြင်မှုဂယက်ရယ်နဲ့ ယူကရိမ်းဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု ထဲ ပါလာခဲ့တယ်။ ဘာပြောကောင်းမလဲ၊ ရုရှားတွေနဲ့ အတူ ဒုက္ခကြီးပုံများ က ခုထိလည်း တဂျိမ်းဂျိမ်းထောင်းနေတာပါပဲ။
အတန်းထဲမှာ ကောင်ထွားကြီးတကောင်နဲ့ ခုံချင်းကပ်ရက်ထိုင်မိရာကနေ သူငယ်ချင်း သူငယ်ချင်းနဲ့ သူ့ကိုယ်လုံးကြီးနဲ့ ဖိနှိပ်စက်ခံနေရသလိုပါပဲ။
ကျောက်စိမ်းဗျာ။ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ကျောက်စိမ်းတွေ၊ တန်ဖိုးအမြင့်ဆုံး၊ ဈေးအကြီးဆုံး။ ဧရာမမြေသယ်ကားကြီးတွေ ဘူဒိုဇာကြီးတွေနဲ့ကို တူးနေတာ။ အုံနဲ့ ကျင်းနဲ့ကို တူးနေတာပါ။ ဘယ်သူတွေ ရသလဲ ဆိုတော့ ကချင်တွေ မုန်းတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေလည်း မြင်တဲ့အတိုင်း သူတို့ဒေသ အညာမှာ သောက်စရာ ရေတောင်မရှိပါဘူး။ မွဲ လိုက်တာမှ ပြာ လို့။ ကချင်က မှ ဘယ်လောက်ဆင်းရဲရဲ ရေတော့ နပ်မှန်မယ် ထင်ပါတယ်။ အောင်မယ် ငတို့ ရေသောက်ရဖို့နေနေသာသာ တနေ့တနေ့ တဂျိမ်းဂျိမ်ူနဲ့ ပစ်နေ ခတ်နေတာကနေ အသက်နဲ့ ကိုယ်အိုးားမကွဲအောင် ပြေးနေ ပုန်းနေရတာပါ ကွာ ဆိုလည်း ဟုတ်နေပြန်တာပါပဲ။
ဝ က တော့ ပြတ်တယ်။ မင်းတို့နဲ့ နှစ် ၆၀ ကျော် ပေါင်းလာတာ ငါတို့ လူမွေး လူတောင်မပြောင်ခဲ့ဘူး၊ မင်းတို့နဲ့ မပေါင်းတော့ဘူး။ မင်းထက် ဗလကြီး တဲ့ မင်း ဆရာတင်ထားတဲ့ ကောင်နဲ့ပေါင်းမယ် ဆိုပြီး တဒေသ လုံး ဗူးသီးငပေါင်းကြော်စာလုံးကြီးတွေ တဖွေးဖွေးနဲ့ နေပစ်လိုက်တော့တယ်။ ကဲ ဘာတတ်နိုင်သေးလဲ။ တသက်လုံး ထု ချင်သလို ထု လာ၊ နှက် ချင်သလို နှက်လာတဲ့ ကောင် အခန်းထဲလည်း ဝင်သွားရော သူက ဆရာ ဆရာ နဲ့ ကြောက်ရတဲ့ကောင်ကြီးနဲ့ ယှဉ်လျှက်သားထိုင်ပြီး ဒါ ငါ့သူငယ်ချင်းပဲ မင်းထိရဲထိကြည့် လို့ ဟိုကပြောတော့ တုပ်တုပ်တောင်မလှုပ်ရဲ။ မျက်လွှာတောင်ပင့်မကြည့်ရဲတော့ဘူး။ နှစ်ပေါင်း ၆၀ နီးနီးတဘက်သတ်ကြီး အနိုင်ကျင့်လာတာများလေ။
ဒါနဲ့ ကချင်မနောပွဲ နဲ့ ဆက်စပ်ပြီး အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေ မှာ လူမျိုးတူ နေတာ ကချင် ချင်း ရှမ်း အားလုံးလိုလို ပါလား။ မြန်မာ က လွဲ ရင် ထင်ပါရဲ့။ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေ ကတော့ ခြွင်းချက်ပေါ့ ဗျာ။
တရုတ်မှာဆို ကချင်က နည်းနည်းနှောနှော မှ မဟုတ်တာ။ ကချင်ဖြစ်တာချင်းအတူတူ တရုတ်ပြည်က ကချင် က ငြိမ်းချမ်းစွာ ပညာသင်ရ၊ ကမ္ဘာချီ ချမ်းသာ ခရီးပေါက်နိုင်။ ကျေးညီနောင်ပုံပြင်ထက်ဆိုးတဲ့ တမျိုးတည်းပေမဲ့
တနေရာစီကွဲတာနဲ့ မွဲတာ ချမ်းသာတာ ကွာလိုက်တဲ့ပုံ။
ခင်ဗျားတို့နဲ့ မပေါင်းချင်တော့ဘူးဗျာ။ ကျနော်တို့ကို လွတ်မြောက်ခွင့်ပေးပါတော့။ ရှိသမျှကျောက်စိမ်းတွေ၊ ဓါတ်သတ္တုတွေ ခု ဧရာဝတီပါမကျန် ခင်ဗျားတို့ ထင်တိုင်းခြယ်လှယ် ယူပြီးပါပြီ။ ကျနော်တို့ကို ခွဲထွက်ခွင့်ပေးပါတော့၊ ဒါမှ မဟုတ် ချမ်းသာတဲ့ ကျနော့်အမျိုးတွေ နဲ့ အတူ ပေါင်းနေခွင့်ပြုပါတော့ လို့ ပြောလာခဲ့ရင် ဒါ အချုပ်အခြာ အာဏာ ထိပါးတာ လို့ ဒေါသတကြီးနဲ့ ပြောတဲ့ ကချင်တွေ ကို တဒိုင်းဒိုင်းစစ်တိုက်သင့်ဈ မသင့် ကျနော်ဟာ စဉ်းစားနေမိတယ်။
ကျနော် ငယ်ငယ်က ခွေးလေး၊ ကြောင်လေးတွေ မွေးတယ်။ ကြက်တိန်ညင်လေးတွေ၊ ဘဲငန်းကြီးတွေ မွေးတယ်။
သူတို့ကို ချည်နှောင် ချုပ်နှောင်ပြီး မမွေးခဲ့ဘူး။ မိသားစု ဝင် လိုသဘောထားတယ်။ ချစ်တယ်။ ကျနော့်ကြောင်ဆို ကျနော့်ကို သူ့အောက်ကညီ ကို ဆက်ဆံသလို ဆက်ဆံတယ်။ တော်တော် ကြောင်ဝါးဝပြီး အနိုင်ကျင့်တဲ့ကောင်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ဆိုတာ ဘယ်လောက်အားကြီးသလဲဆိုတော့ ကျနော်မွေးခဲ့ သမျှ ခွေး ကြောင် ကြက် နဲ့ ဘဲငန်းကြီးတွေ က အစ အကုန် လူလို ယဉ်ပါးတယ်။
ငဖြူကြီး ငညိုကြီး လို့ ဘဲငန်းကြီး တွေ အကြောင်းပြောတာ တဂီးဂီး နဲ့ အတောင်ပံကြီးတွေ ဖြန့်ပြီး အိမ်ပေါ်တက်လာတယ်။
ကြက်တိန်ညင်တွေဟာ ကျနော့်အမေခြံထဲဆင်းတာနဲ့ လမ်းလျှောက်လို့မရအောင်ပတ်ပြီး ရစ်နေတယ်။
ကြောင်ပူစီကြီးကတော့ တညလုံးလည်ပြီး ကျနော့်ခြင်ထောင်ထဲ ဝင်၊ ကျနော့် ကိုယ်ကိုယ်မှီ ကျနော့်ခေါင်းအုန်းကို သူပါအုန်းပြီး အိပ်တယ်။ ချစ်ရတာလေ။
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေကိုတောင် သက်ရှိသတ္တဝါတွေ အနေနဲ့ လေးစားရ၊ ချစ်ရကောင်းမှန်းသိတဲ့ ဗုဒ္ဓဝါဒီတွေဟာ တိုင်းရင်းသားတွေ ကို အချုပ်အခြာအာဏာ ဆိုတဲ့ ဘာမှန်းမသိတဲ့ ဟာကြီးနဲ့ ချုပ်ခြယ်စိုးမိုးထားစရာ မဟုတ်လောက်ပါဘူး။
ချစ်လို့ဆိုပြီး လှောင်ချိုင့်ထဲ ထည့်မွေးစရာ မဟုတ်ပါ။
ခင်ဗျားတို့ တကယ်ကော ချစ်ရဲ့လား.
ဆင်းရဲနုံချာစွာနဲ့ နေသွား သေသွား ဆေးကုသစရာမရှိ လျှပ်စစ်မီး မရှိ ရေသန့်မရှိတဲ့ ဘဝတွေ ကနေ၊ မြန်မာစစ်တပ်ဝင်လာရင်တွေ့ရာ ဆွဲချ ပစ်ခတ်စားသောက် မိန်းကလေးဆို မုဒိန်းကျင့် ယောက်ျားလေးဆို ပေါ်တာထမ်းခိုင်း အနိုင်ကျင့်ပြီး နှစ် ၆၀ နေခဲ့ရတာနဲ့စာရင် တရုတ်စာသင် တရုတ်လိုပြော တရုတ်ပိုက်ဆံကိုင်ပြီး ဝ အဖိုးအဖွားတို့ ဆေးကုသမှု လုံခြုံမှု နဲ့ လူတန်းစေ့ နေ နေကြတာကို ကျနော် မုဒိတာပွား ဝမ်းသာပါတယ်။
ခွဲထွက်မှ သူတို့ ချမ်းသာမယ်ဆို ခွဲထွက်ကြပါစေ။ အားနာစွာနဲ့ သူတို့တအိုးတအိမ်ထူထောင်ရာမှာ လိုတဲ့အကူအညီ စွမ်းသမျှ ကူညီပေးချင်ပါသေးတယ်။ ဒါမှ သူငယ်ချင်းကောင်း ပီသတော့ပေမပေါ့။
ကျနော် စာနာသော နှလုံးသားနဲ့ သူတို့နေရာမှာ ငါသာဆိုရင် ဆိုတဲ့ ကချင်ဖြစ်ကြည့်၊ ဝ ဖြစ်ကြည့် ခံစားစာနာစိတ်နဲ့ ချစ်ပြီး ကို ရေးရပါတယ်။
ကျနော်ချစ်သော တိုင်းရင်းသားညီအကိုမောင်နှမတွေ ချမ်းချမ်းသာသာ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့ လူတန်းစေ့ နေနိုင်ကြရပါစေ။
ပြည်ထောင်စု ဆိုတာကြီး တဂျိမ်းဂျိမ်း လူသတ်ယန္တရားကြီးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ကျနော်ပြည်ထောင်စု မလိုချင်ပါ။ခင်ဗျားတို့ရဲ့ မဆလပြည်ထောင်စု စိတ်ဓါတ် ကျနော့်မှာ မရှိပါ။
လူ ကို လူလိုမြင်ပြီး
လူကို လူချင်း ချစ်စိတ်စာနာစိတ်ပဲ ကျနော့်မှာ ရှိပါတယ်။
ကမ္ဘာကြီး မှာ မြေတွေ ကျနော်တို့ အများကြီး ပိုင်ဖို့က အဓိက မဟုတ်ပါ။ အေးချမ်းစွာ ချစ်ခင်စွာ ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ အပြန်အလှန်ဆက်ဆံကူးလူးနေသွားကြဖို့ကသာ အဓိက လို့ ခံယူမိပါတယ်။
Posted by myu shadan at 4:00 PM No comments:
ဟန်ဆောင်မျက်နှာဖုံးနောက်ကွယ်က ဗမာ့တပ်မတော ရဲ့ သရုပ်မှန်
တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ရင် တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေနေတဲ့ ကျေးရွာ၊ဘုရားကျောင်းတွေကို ဗမာ့တပ်မတော် က မိုင်းခွဲလို့တစ်မျိုး၊ မီးရှို့လို့တစ်ဖံ တိုင်းရင်းသူတွေကို မုဒိန်းကျင့်လိုက်နဲ့ ဖျက်ဆီးနေတာတွေ့နေရပါတယ်။ တော်တော်လေး အောက်တန်းစားဆန်တဲ့ ဗမာ့တပ်မတောလို့ပဲ ပြောချင် တယ်။ ဖြစ်တာက KIA တပ်နဲ့လေ၊ ဒီကျေးရွာ၊ဘုရားကျောင်းတွေ တိုင်းရင်းသူတွေ နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲ၊ မကျေနပ်ရင် KIA တပ်တွေကို နိုင်အောင်တိုက်ပေါ့၊ အခုတော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ ရှုံးပြီဆိုတာနဲ့ တိုင်းရင်းသားတို့ကျေးရွာ ၊ ဘုရားကျောင်း တွေ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူတွေကို ရှုံးမဲ မဲတော့တာပါပဲ။ သတ္တိကလည်း နည်း၊ စိတ်ဓာတ်ကလည်း အောက်တန်းစားဆိုတော့ ဗမာ့တပ်မတော ခေါင်းဆောင် ဖြစ်တဲ့ ကာချုပ် မင်းအောင်လှိုင်၊ နာဘူးစိုးဝင်း နဲ့ ကြည်းတပ် လေတပ် အမြောက်တပ် ဟိုးအောက်က ရဲဘော်အထိ ထမီဝတ်၊ သနပ်ခါးလိမ်း၊ ပန်းပန်ထားလိုက်တော့လို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ်မှာ တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တိုင်း မင်းအောင်လှိုင်ရဲ ထမီဝတ်တပ်က တိုင်းရင်းသားရွာတွေကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးတယ်၊ ကချင် တိုင်းရင်းသားတွေကိုအပြစ်မဲ့ရိုက်နှက်နှိပ်စက် ဖမ်းစီးတယ် ရွာသားတွေကို လူသားဒိုင်းလုပ်ပြီးတိုက်တယ်၊ ကျောက်မျက်ကုမ္ပဏီဝင်းတွေထဲမှာ တပ်စခန်းထိုင်ပြီး ကာဗာလုပ်တယ်။ အများ ပြည်သူ သွားလာနေတဲ့ လမ်းဆုံလမ်းခွနေရာတွေမှာ လုံခြုံရေးပြောပြီး ရိုက်နှက်စစ်ဆေးငွေညစ်တယ်။ ဒါဟာ ဗမာ့တပ်မတောရဲ့ ယောက်ျား မဆန်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေပါ။ တိုင်းရင်းသားတွေ ဒုက္ခရောက်မှ သူတို့ မအလ အဖွဲ့ စိတ်ချမ်းသာတယ်ထင်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် အဖျက်အမှောက်လုပ်ငန်းတွေကို သူတို့ စွဲစွဲမြဲမြဲ လုပ်နေကြတာ။ အရင်တုန်းကတော့ KIA နဲ့ ဗမာ့တပ်မတော် တိုက်ပွဲဖြစ်တိုင်း ကိုယ်ကလည်း ဗမာဆိုတော့ ဗမာ့တပ်မတော ဘက်က အားပေးခဲ့ ခဲ့မိတယ်။ အခုတော့ မအလ တပ်မတောကို တိုင်းရင်းသားတပ်ဖွဲ့ အားလုံးပေါင်းပြီး စိစိညက်ညက်ကြေအောင် တိုက်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။
ဘယ့်နှယ်ဗျာ။ တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေ အေးအေးဆေးဆေး လုပ်ကိုင်စားသောက်နေတဲ့ ဒေသတွေထိ နယ်ချဲ့ရမ်းကား အနိုင်ကျင့်ချင်တဲ့ အကျင့်က ပျောက်ကို မပျောက်နိုင် တာ။ အခုလည်း ကြည့်လေ။ အောင်ဘာလီ ရွာကနေ ၇ မိုင်လောက် ဆုတ်ထားတဲ့ KIA တပ်ရင်း ၆ ကို သွား တိုက်ပြန်ပြီတဲ့လေ။ တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီ ဆိုတော့ ဖားကန့်ကို ကုန်စိမ်းအဓိက တင်ပို့ပေးတဲ့ ရွာလဲ မအလ တပ်တွေ ကိုကြောက်လို့ ထွက်ပြေးကုန်ပြီ။ ဒါကြောင့် ဖားကန့်မှာ ကုန်စိမ်းတွေတောင် ပြတ်နေပြီတဲ့။ ကြားရတာကတော့ အဲဒီရွာက ကုန်စိမ်းတွေ ကား ၈ စီး အပြည့် အတင်းလုယူသွားတယ် ကြားတယ်။ တော်တော်လေး စိတ်ပျက်ဖို့ ကောင်းတယ်ဗျာ။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် အခု ဗမာအစိုးရ က တာဝန်ပေးပြီး လုပ်နေတဲ့ ဦးအောင်မင်း ရဲ့ MPC တွေဘက် က အပစ်ရပ်ရေးဆိုတာကို လုံးဝအယုံအကြည်မရှိတော့ဘူး။
“ တိုက်ပွဲဖြစ်တာမှန်ပါတယ် KIA တွေက ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး အမြန်အကောင်အထည်ဖေါ်နိုင်အောင်ဆိုပြီး အောင်ဘာလေ ကျေးရွာက ဗမာစစ်ကြောင်းပြန်သွားပြီးနောက် အစောင့် နည်းနည်းပဲရှိတာတောင်ပြန်သွားမသိမ်းဘူး အဲဒါ ကိုအခုဗမာစစ်တပ် စစ်ကြောင်းပြန်ဝင်ပြီး ၇ မိုင်လောက်ဆုတ်ထားတဲ့ KIA တပ်ကိုသွားတိုက်တာ ” ဟု ဖားကန့်မြို့ခံတစ်ဦးက ဆိုပါတယ်။
ဗမာတပ်တွေ လာတိုက်လို့ ထွက်ပြေးလာတဲ့ ရွာသားတချို့ ကို KIA က ကာကွယ်ထားပါတယ်။ တချို့ကိုတော့ ခရစ်ယာန် အသင်းတောတွေက နေရာထိုင်ခင်းတွေ စားဝတ်နေရေး တွေကို ပူးပေါင်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ ဒေသခံတချို့က ပြောပါတယ်။ဗမာ့တပ်မတော အနေနဲ့ ကချင်ပြည်နယ်မှာသာမက ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း နယ်မြေအထိလာပြီး ခိုးဆိုးလုယှက် မုဒိန်းကျင့် ရွာမီးရှို့ ဖျက်ဆီး နေခြင်း ဟာ တိုင်းရင်းသားပြည်သူအားလုံးကိုရော UNFC နဲ့တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အားလုံးကိုပါ မထီမဲ့မြင်ပြုရာ ရောက်နေပါတယ်။ အဲဒီလို ရွာမီးရှို့ ရွာထဲ လက်နက်ကြီး ပစ်ထည့် တိုင်းရင်းသူတွေကိုဖျက်ဆီးတိုင်း ဗမာ့တပ်မတော် ဟာ ၀န်မခံဘဲ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များအပေါ် လွှဲချတတ်တာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။
“ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကို သွေးတိုးစမ်းနေတာလေ၊ အပစ်ရပ်ဖို့အောင်မြင်လာရင် ဗမာ့တပ်မတောက ဖျက်ဆီးပစ်မယ်၊ အပစ်ရပ်ပျက်ရင် တိုင်းပြည် ငြိမ်းချမ်းရေးပါ ပျက်မယ်၊ တိုင်းရင်းသားအားလုံးတန်းတူရေး ကိုယ်ပိုင်ပြဌန်းခွင့် ဆိုတာတွေ မဖြစ်လာနိုင်ဘဲ ဗမာ့တပ်မတောက အာဏာနဲ့ တိုင်းပြည်ကိုချယ်လှည်မယ်၊ တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းဖို့ အချိန်ပိုပေးရမယ်၊ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံ ရေး ပိုပြီးစိုးရိမ်ရမယ်၊ ဗမာ့တပ်မတော က အဲဒီလို အကျင့်ရှိနေလေတော့ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ အသက် အိုးအိမ် ပစ္စည်းတွေ ပျက်စီးဆုံးရှုံးတာပေါ့၊ တိုက်ပွဲပေါင်းများစွာ ဖန်တီးရင် လွတ်တောမှာ စစ်အသုံးစရိတ်တွေ တိုးတောင်းမယ် နိုင်ငံတော် ဘဏ္ဍာတွေ အများကြီးကုန်မယ်၊ တိုင်းပြည်ပညာရေးနဲ့ ကျန်းမာရေးနိမ့်ကျမှု မှာ ဗမာ့တပ်မတော ခေါင်းဆောင်တွေကို တာဝန်ခံခိုင်းရမယ်လေ၊ သူတို့က ဘယ်တော့မှ ၀န်မခံဘူး၊ ၀န်မခံရင်လည်းနေပါစေ၊ တိုင်းရင်းသားနယ်မြေမှာ လှုပ်ရှားနေတဲ့ ဗမာမုဒိန်းတပ် ကို အပြတ်သာ လိုက်ရှင်း၊ ဒီကောင်တွေ သေမှအေးမှာ ” ဟု တိုင်းရင်းသားအရေး လေ့လာသုံးသပ်သူ ဒေသခံ မြဝတီသတင်းထောက်တစ်ဦးကလည်း ပြောကြား သွားပါတယ်။
တိုင်းရင်းသားဒေသ မုဒိန်းသတ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တပ်မတော် သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေး အဖွဲ့က အဲဒီနယ်မြေတွေမှာ ဗမာ့တပ်မတောသား တို့ လှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပေမယ့် သူတို့လုပ်တယ်လို့ မပြောနိုင်ကြောင်း၊ ဓါတ်ပုံသက်သေမပြနိုင်ပဲ စွပ်စွဲလို့မရကြောင်း ပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဗမာတပ်မတော ရဲ့လုပ်ရပ်ကို ဖုံးဖို့ကြိုးစားပြီး လွတ်တော မှာလဲနေရာယူထား မီဒီယာတွေကိုလဲ တင်းကြပ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ်၊ ဖားကန့်မြို့နယ်မှာ ဒီနှစ် ဇန်န၀ါရီလတုန်းက KIA နဲ့ ဗမာ့တပ်မတောတို့ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီကာလတုန်းကလည်း ဗမာ့တပ်မတော အချင်းချင်းမှားပစ်ကြလို့ ကချင်ကျောင်းသူတစ်ယောက်သေခဲ့ရတယ်။ဗမာ့ကြောင်ချီး တပ်တွေက ကျောက်မျက်ကုမ္ပဏီဝင်းတွေ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း ရွာတွေထဲ မှာ ပြည်သူကို ကာဗာလုပ် စခန်းချကြလို့ KIA အဖွဲ့က ပြည်သူကို ထိမှာဆိုးပြီး တိုက်ခိုက်မှုတွေ မပြုလုပ်ခဲ့ကြ တာ အကြိမ်ကြိမ်ပါ။
ဖားကန့် - မိုးကောင်း သွားလမ်းပေါ်က တံတားတွေ၊ ခွန်ဆိုင်ဇွတ်ရွာအ၀င်က တံတားနဲ့ နမ့်ခိုင် ကျေးရွာအနီးက တံတားတွေမှာလည်း စခန်းထိုင်ပြီး ကားသမားတွေကို လုံခြုံရေးယူခ ဆိုပြီး ပိုက်ဆံအတင်းတောင်း ကချင်လူငယ်တွေကို တွေ့ရင်လဲ မင်းတို့ KIA တွေဆိုပြီး အကြောင်းမဲ့ အပြစ်မဲ့ ရိုက်နှက် ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ တိုက်ပွဲဖြစ်တိုင်း အများပြည်သူကို ကာဗာ လုပ် ကြောက်ချီး ထွက်တာ လက်နက်မဲ့ပြည်သူကို ပဲဖြဲခြောက်တတ်တာ ကမ္ဘာမှာ ဗမာ့တပ်မတောပဲ ရှိတယ်ဆိုတာ ငြင်းလို့မရပါဘူး။
“ တိုက်ပွဲတွေဖြစ်မယ်၊ တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ရင် ဖြစ်တဲ့ဒေသ ကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြေညာမယ်၊ ပြည်သူတွေကို စိုးရိမ်ကြောက်လန့် နေအောင် ဖန်တီးမယ်၊ ဒါမှ နယ်မြေ မအေးချမ်းမှာလေ၊ နယ်မြေမအေးချမ်းမှ သူတို့ လုပ်စားလို့ရမှာ၊ တစ်နည်း ပြောရရင် ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်လို့မရမှာလေ၊ မအလ ရဲ့ ဗမာ့တပ်မတော က ဘယ်တော့မှ ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ချင်မှာမဟုတ်ဘူး၊ အခု အပစ်ရပ် လက်မှတ် ထိုးနိုင်ဖို့ ဆွေးနွေး အဖြေရှာရအောင်ဆိုပြီး ဟိုအဖွဲ့ကို တိုက်လိုက် ဒီအဖွဲ့ကို သွားတိုက်လိုက် လေယှဉ်နဲ့ ပစ်လိုက် လုပ်နေတာကိုကြည့်ရင် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဟန်ပြသက်သက် လုပ်နေတယ်ဆိုတာသိသာပါတယ်။ မင်းသားခေါင်း ဆောင်းထားတဲ့ ဘီလူးလိုမျိုး ဗမာစစ်တပ်ကကျင့်ကြံနေတာ၊ သူတို့သရုပ်မှန်က တစ်ဖက်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို စိတ်ဝင်စားသလိုလုပ်မယ်၊ အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ ငြိမ်းချမ်းရေး မရအောင် တိုက်ပွဲတွေဖန်တီးမယ်၊ တိုင်းရင်းသား ဒေသ တွေကို အကုန်ဖျက်ဆီးမယ်၊တိုင်းရင်းသားတွေ ဒုက္ခသည်ဖြစ်ပြီး ပညာကောင်းကောင်းမသင်ရ စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲအောင်လုပ်မယ်။ တော်တော် ကြောက်စရာကောင်းသလို ရွံဖို့လည်းကောင်းတဲ့ ဗမာ့တပ်မတောပါ ” ဟု ငြိမ်းချမ်းရေးလိုလားသော ပြည်သူ့လွတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦး ကလည်း ပြောကြားသွားပါတယ်။
(ဝါးရင်းဒုတ် သူရဲကောင်း ဦးအောင်ဇေယျ ရေးသားသည်။)
Posted by myu shadan at 7:57 PM No comments:
UPWC နှင့် NCCT တို့ ဆက်လက် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရန် အလား အလာကောင်းဟုဆို
တပြည်လုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး အတွက် ဆွေးနွေး ပွဲများ ပြန်စဖို့ MPC တာဝန် ရှိသူ များမှ NCCT အဖွဲ့အား ထိုင်းနိုင်ငံ၌ လာရောက် ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေး နေစဉ်
အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ် များနှင့် ပက်သက်၍ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖေါ်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း ကော်မီတီ (UPWC) နှင့် တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရေး အဖွဲ့ NCCT တို့ ပြန်လည် ဆွေးနွေး နိုင်ရန် အတွက် မြန်မာ့ ငြိမ်းချမ်းရေး စင်တာ MPC တာဝန် ရှိသူ များနှင့် NCCT အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် တို့ ဒီဇင်ဘာလ ၂ရက်နေ့က တွေ့ဆုံ မှုတွင် အပြုသဘော ဆောင်ပြီး အလားအလာ ကောင်းသည်ဟု NCCTမှ ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာက ရွှေဟင်္သာ သတင်း ဌာနအား ပြောကြား ခဲ့သည်။
“ဆွေးနွေးချက် တွေက အပြုသဘော ဆောင်တယ် အလားအလာ ကောင်းတယ်။ နီးစပ်မှု ရှိတယ်လို့ ပြောနိုင် ပါတယ်။ ကျွန်တော် တို့က တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရေး ဆိုင်ရာ အချက် (၅) ချက်ကို တင်ပြ ခဲ့တယ်။ MPC ဘက်က UPWC ကိုယ်စားကို ဖိတ်တာ ကတော့ ဒီလ (၁၇) ရက်နေ့ ရန်ကုန် အရောက် (၁၈) နဲ့ (၁၉) ရက်မှာ တွေ့ ဆုံ ဆွေးနွေး နိုင်ဖို့ ကိစ္စ အတွက်ပေါ့” ဟု ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာက ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်နေ့တွင် ရွှေဟင်္သာ သတင်းဌာနသို့း ပြောသည်။
သို့သော်လည်း ထို MPC ကိုယ်စားလှယ် များ၏ တင်ပြ ချက်အား NCCT အဖွဲ့ ဘက်မှ အခြား လိုအပ်ချက်များ ရှိနေ သောကြောင့် တွေ့ဆုံမည့် နေ့ရက် အတိအကျ မသတ်မှတ် နိုင်သေးဟု ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာက ဆက်ပြောသည်။
အကြို ညှိနှိုင်းပွဲတွင် UPWC နှင့် NCCT တို့အကြား နှစ်ဖက် ဆက်လက် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရန် အချက်အား NCCT ဘက်မှ မူအရ သဘောတူ ကြောင်းနှင့် တွေ့ဆုံ NCCT ဘက်မှ တင်ပြ ထားသည့် ဆွေးနွေးရေး ဆိုင်ရာ အချက် (၅) ချက်ကို UPWC ထံ တင်ပြ သွားမည်ဟု မြန်မာ့ ငြိမ်းချမ်းရေး စင်တာမှ အကြီးတန်း အရာရှိ ဦးလှမောင်ရွှေ ကလည်း ရွှေဟင်္သာ သတင်း ဌာနသို့ ဒီဇင်ဘာလ ၂ရက်နေ့က ပြောသည်။
“ဆွေးနွေးပွဲတွေ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ဖို့ ပေါ့လေ၊ ကျွန်တော်တို့ တချို့တော့ ပြင်ဆင် ညှိနှိုင်း ထားတဲ့ ကိစ္စရပ် တချို့ကို ကျွန်တော်တို့ ပြောဆို ပြီးတော့ ပေးလိုက် တာလည်း ရှိပါတယ်။ အဲဒီ အပေါ်မှာ NCCT အနေနဲ့ ကတော့ မူအားဖြင့် ဆွေးနွေးပွဲ ပြန်လုပ်ဖို့ သဘော တူပါတယ်။ သူတို့ ဘက်က သိချင်တဲ့ အချက် (၅) ချက်ကို မေးထားတဲ့ အပေါ် ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်းကို ပြန်တင် ပြမယ်။ ဆွေးနွေးပွဲ ဆက်လက် ဖြစ်ပေါ်ဖို့ ကတော့ တော်တော်လေး အလားအလာ ကောင်းပါတယ်” ဟု ဦးလှမောင်ရွှေက ပြောသည်။
မြန်မာ အစိုးရ စစ်တပ်နှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့ များအကြား ဖြစ်ပွား နေသည့် စစ်ရေး ပဋိပက္ခများ ချုပ်ငြိမ်းရန်အတွက် တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး စာချုပ် ချုပ်ဆို နိုင်ရန် အတွက် ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာ လတွင် ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖေါ်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း ကော်မီတီနှင့် တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ် အခတ် ရပ်စဲရေး ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရေး အဖွဲ့ (NCCT) တို့ အကြား တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး ခဲ့ကြ ရာ၌ တွင် တပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ် များနှင့် ပက်သက်၍ တိကျသော အဖြေ မရ ခဲ့သည့် နောက်ပိုင်း၌ တွေ့ဆုံပွဲများ တစ်လခန့် ရပ်တန့် နေခဲ့သည်။
အထူးသဖြင့် ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု တပ်မတော် ဖွဲ့စည်းရေး အပိုင်းတွင် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့် အမြင် ကွဲလွှဲမှု ရှိနေ ခဲ့သည်။
ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု တပ်မတော် ဖွဲ့စည်းရေး ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်နှင့် ပက်သက်၍ NCCT နှင် အစိုးရ တို့အကြား ဆွေးနွေးရန် သဘော တူညီချက် ရှိနေသော်လည်း လက်ရှိ အနေအထား အရ ဖွဲ့စည်းရန် စောလွန်း သေးသည်ဟု မြန်မာ့ ငြိမ်းချမ်းရေး စင်တာမှ အကြီးတန်း အကြံပေး အရာရှိ ဦးလှမောင်ရွှေ ကလည်း ဆိုသည်။
“ဖက်ဒရယ်ကို အခြေခံတဲ့ ပြည်ထောင်စု စနစ်ကို သွားမယ် ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ သဘောတူ ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ထောင်စု တပ်မတော် ကိစ္စကို သဘောတူ ထားပြီး ဖြစ်တဲ့ အတွက် အဲဒီ အချိန်မှာ ဆွေးနွေး နိုင်ဖို့ ပါဘဲ။ အခု လောလောဆယ် ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု တပ်မတော် ထူထောင်ဖို့ ကြိုးပမ်း တာဟာ အဆင့်ကျော် နေတဲ့ သဘောမျိုး လို့လဲ ယူဆပါတယ်” ဦးလှ မောင်ရွှေက ရွှေဟင်္သာ သတင်းဌာနအား ဒီဇင်ဘာလ (၂) ရက်နေ့၌ ပြောကြား ခဲ့သည်။ဟု သူကပြောသည်။
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် မှူးကြီး မင်အောင်လှိုင် အနေနှင့် ဖက်ဒရယ် တပ်မတော် ဖွဲ့စည်းရေးကို လုံးဝလက် မခံ နိုင်ကြောင်း နိုဝင်ဘာ လကုန် ပိုင်း၌ ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU) ဥက္ကဌ မူတူးဆေးဖိုး တို့အဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး စဉ်တွင် ပြောဆို ခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖေါ်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း ကော်မီတီ (UPWC) နှင့် တပြည်လုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရေး အဖွဲ့ NCCT တို့ အကြား နှစ်ဖက် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှု ပြုလုပ် နေ သည့် ကြားမှလည်း ကချင် ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း တို့တွင် မြန်မာ့ တပ်မတော်နှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ တို့အကြား တိုက်ပွဲများ ဆက်လက် ဖြစ်ပွါး နေဆဲ အခြေအနေ၌ ရှိနေသည်။
Posted by myu shadan at 7:32 PM No comments:
ဖက်ဒရယ် တပ်မတော် (FUA) အဖွဲ့၏ လွတ်မြောက် နယ်မြေ တစ်နေရာ၌ နှစ်ရက်တာ ကျင်းပ ခဲ့သည့် ပထမ အကြိမ် စစ်ဦးစီး အဖွဲ့ အစည်းအဝေး အတွင်း၌ စစ်ဒေသ နှစ်ခု ဖွဲ့စည်း ခဲ့ကြောင်း အစည်အဝေး တက်ရောက် ခဲ့သည့် အမည်မဖော် လိုသူ စစ်ဖက် အရာရှိ တစ်ဦးက ရွှေဟင်္သာ သတင်းဌာနသို့ နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့က ပြောသည်။
“မြောက်ပိုင်း စစ်ဒေသကိုတော့ ဗိုလ်ချုပ် ဂမ်ရှောင်က ဦးဆောင်ပြီး မြောက်ပိုင်း တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေကို တာဝန်ယူ သွားမယ်၊ တောင်ပိုင်း စစ်ဒေသ ကိုတော့ ဗိုလ်မှူးချုပ် ဘောကျော်ဟဲက တာဝန်ယူ သွားမယ်၊ စစ်ဦးစီးချုပ် ကိုတော့ ကျနော်တို့ မရွေးနိုင်သေးလို့ ဗိုလ်ချုပ် ဘီတူးကိုပဲ ယာယီ ဦးစီးချုပ် အဖြစ် ဆက်ခန့်ထား ခဲ့တယ်” ဟု အဆိုပါ စစ်ဘက် အရာရှိမှ ရွှေဟင်္သာ သတင်းဌာနအား ပြောကြား ခဲ့သည်။
FUA မြောက်ပိုင်း စစ်ဒေသ တာဝန်ခံ ဗိုလ်ချုပ် ဂမ်ရှောင်
ထိုအစည်းအဝေး အတွင်း UNFC မှ ကနဦး ချမှတ် ထားသည့် မူအတိုင်း တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေး ပွဲကို ကြားနိုင်ငံ တစ်ခု၌ ကျင်းပရေး၊ ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေး ပွဲတွင် နိုင်ငံ တကာ အသိသက်သေ ထားရှိရေး စသည့် အချက် များအား တနိုင် ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ညှိနှိုင်းရေး အဖွဲ့ (NCCT) မှ အားနည်း ချက်များ ရှိခဲ့သည့် အပေါ် ဝေဖန် ဆွေးနွေး ခဲ့ကြောင်းလည်း FUA အကြံပေး အရာရှိ ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာက ရွှေဟင်္သာ သတင်းဌာနအား ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့တွင် ပြောကြား ခဲ့သည်။
ညီညွှတ်သော တိုင်ရင်းသား လူမျိုးများ ဖက်ဒရယ် ကောင်စီ (UNFC) အဖွဲ့ဝင် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တပ်များ ပါဝင် ဖွဲ့စည်း ထားသည့် ဖက်ဒရယ် တပ်မတော် (FUA) ၏ ပထမ အကြိမ် စစ်ဦးစီး အဖွဲ့ အစည်း အဝေးအား နိုဝင်ဘာလ (၂၈) နှင့် (၂၉) ရက်နေ့တို့တွင် နှစ်ရက်တာ လွတ်မြောက် နယ်မြေ တစ်နေရာ၌ ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုအစည်း အဝေးအား တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ (၈) ဖွဲ့မှ ကိုယ်စားလှယ် (၁၁) ဦး အကြံပေး တစ်ဦးနှင့် လေ့လာသူ (၃) ဦး စုစုပေါင်း (၁၅) ဦး တက်ရောက် ခဲ့သည်။
ထို စစ်ဦးစီးများ အဖွဲ့၏ ပထမ အကြိမ် အစည်း အဝေးအား FUA အဖွဲ့ဝင် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ (၈) ဖွဲ့ဖြစ်သည့် ကချင်ပြည် လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ ၊ ကရင်နီ အမျိုးသား တိုးတက်ရေး ပါတီ၊ ပလောင်ပြည် လွတ်မြောက်ရေး တပ်ဦး၊ ကရင် အမျိုးသား အစည်းအရုံး လက်အောက်ခံ ကရင်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်၊ မွန်ပြည်သစ် ပါတီ၊ ရခိုင်ပြည် တပ်မတော် (AA)၊ လားဟူ ဒီမိုကရက်တစ် သမဂ္ဂ၊ ချင်းအမျိုးသား တပ်ဦး အဖွဲ့ (၈) ဖွဲ့ တို့မှ စစ်ဦးစီး အဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက် ခဲ့ကြသည်။
သို့သော်လည်း “ဝ” အမျိုးသား အဖွဲ့ချုပ်၊ ပအိုဝ့် အမျိုးသား အဖွဲ့ချုပ်၊ ကိုးကန့်နှင့် ရှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း တပ်မတော် တို့မှ စစ်ဦးစီး အဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက် ခဲ့ကြခြင်း မရှိခဲ့ပေ။
၂၀၁၁ ဖေဖော်ဝါရီ၌ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး FUA ၏ ပထမ ဦးဆုံး စစ်ဦးစီးချုပ် အဖြစ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မူတူး ဆေးဖိုး က စတင် တာဝန်ယူ ခဲ့သည်။ ထို့နောက်တွင် ဗိုလ်ချုပ် ဘီတူးမှ စစ်ဦးစီးချုပ် အဖြစ် ဆက်လက် တာဝန်ယူ ခဲ့ပြီး လက်ရှိ FUA စစ်ဦးစီး ချုပ်လည်း ဖြစ်သည်။
FUA တွင် စစ်ဒေသ (၂) ခု ထားရှိပြီး မြောက်ပိုင်း စစ်ဒေသ၌ ကချင်၊ ပလောင် ၊ ရှမ်းမြောက်၊ ဝ နှင့် မိုင်းလား၊ ကိုးကန့် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များ ပါဝင် ပါသည်။ တောင်ပိုင်း စစ်ဒေသ၌ ကရင် အမျိုးသား အစည်းအရုံး၊ ကရင်နီ အမျိုးသား တိုးတက်ရေး ပါတီ၊ မွန်ပြည်သစ် ပါတီတို့ ပါဝင်သည်။
၂၀၁၁ ဖေဖော်ဝါရီလ ကတည်း ကပင် ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖက်ဒရယ် ကောင်စီ (UNFC) နှင့် တစ်ချိန်တည်း အပြိုင် ဖွဲ့စည်း ထားခဲ့သည့် ဖက်ဒရယ် တပ်မတော် FUA အနေဖြင့် ပုံမှန် အစည်းအဝေး (၃) ကြိမ်နှင့် အလွတ် သဘော အစည်းအဝေး (၂) ကြိမ် ကျင်းပ ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
သို့သော်လည်း သီးခြား သတင်း ထုတ်ပြန် ခဲ့ခြင်း မရှိ ခဲ့ပေ။ ယခု သတင်းထုတ်ပြန် ခြင်းသည်လည်း FUA အနေဖြင့် တရားဝင် ပထမဆုံး အကြိမ် သတင်း ထုတ်ပြန် ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
အစည်း အဝေး အပြီး သတင်း ထုတ်ပြန် ချက်သည် တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး အတွက် ညှိနှိုင်းနေသည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ များနှင့် အစိုးတို့၏ ညှိနှိုင်း မှုအား အဟန့် အတား ဖြစ်စေ နိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်း FUA အကြံပေးအရာရှိ ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာက ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်နေ့က ရွှေဟင်္သာ သတင်းဌာနသို့ ပြောကြား ခဲ့သည်။
“ဒီဖက်ဒရယ် တပ်ဖွဲ့ဟာ စုပေါင်း ပြီးတော့ အလုပ်လုပ် ကြတာပါ၊ နိုင်ငံရေး ဦးတည် ချက်ကို ရအောင် လုပ်ဖို့ သဘော ရှိတယ်၊ အခု သွားနေတဲ့ UNFC က ချထားတဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး လမ်းစဉ် ၊ တစ်နိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေး ရဖို့ လမ်းစဉ် ဒီလမ်းစဉ် တွေမှာ အဓိက အောင်မြင်အောင် ဝိုင်းဝန်း လုပ်ဆောင် ဖို့ပါ” ဟု ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာက ပြောသည်။
ယခု သတင်း ထုတ်ပြန်မှုသည် နှစ်ဖက် စက်တင်ဘာလ ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းမှု မပြေလည်သည့် အခြေအနေနှင့် အစိုးရ၏ တိုင်းရင်းသား ဒေသ အပေါ် ထိုးစစ် ၊ နယ်မြေ စိုးမိုးရေး စစ်ဆင်မှု များအား တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် များဘက်မှ စစ်ရေး အရ တုံ့ပြန်မည့် အလားအလာ ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ် ချက်များ ရှိနေ ခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်မှ ဖက်ဒရယ် တပ်မတော်အား လက်မခံ နိုင်ကြောင်း မီဒီယာများအား အတိအလင်း ထုတ်ဖော် ပြောကြား ထားချက်များ ရှိ၍ ယခု FUA ၏ သတင်း ထုတ်ပြန် မှုသည် ဆွေးနွေး ပွဲအား အဟန့်အတန်း ဖြစ်စေ နိုင်သည်ဟု သုံးသပ် ချက်များ ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် ရှိလာခဲ့သည်။
ဦးညို အုန်းမြင့် ကလည်း “ဒီ FUA ကြေငြာချက်ကို ကျွန်တော် ဖတ်ကြည့်တော့ ၊ အထွေထွေကို ထောက်ပြ ထားတယ်၊ ဘာမှ စစ်ရေး ပြင်ဆင်မှုနဲ့ လုပ်မယ် ဆိုတဲ့ စိန်ခေါ် လာတဲ့ အနေအထား မရှိဘူး၊ ကန့်ကွက်တယ် ဆိုတာက သူတို့ ဘက်က တာဝန်အရ ကန့်ကွက် ရတာ ဆိုတာပဲ ရှိတယ်၊ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကို သက်ရောက်မှု မရှိနိုင်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်” ဟု ဦးညိုအုန်းမြင့်က ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်နေ့တွင် ရွှေဟင်္သာ သတင်း ဌာနအား ပြောသည်။
အစည်းအဝေး တွင်း၌ အစိုးရ၏ တိုင်းရင်းသား ဒေသ များအပေါ် စစ်ဆင် နေမှုများ၊ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် များအား သုံးသပ် ခဲ့ကြောင်း ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာက ဆိုသည်။
၎င်း FUA ပထမ အကြိမ် စစ်ဦးစီး အဖွဲ့ အစည်း အဝေး အပြီး၌ နိုဝင်ဘာလ (၃၀) ရက်နေ့၌ FUA မှ ကြေငြာချက် တစ်စောင် ထုတ်ပြန် ခဲ့ပြီး မြန်မာ့ တပ်မတော် အနေနှင့် စစ်မှန်သော ငြိမ်းချမ်းရေးကို စတင် ဖော်ဆောင် နိုင်ရန် အခြေခံ ဖြစ်သော တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး စာချုပ် ချုပ်ဆို နိုင်ရေး ကြိုးပမ်း နေသည့် ကာလတွင် အနှောက်အယှက် အဟန့်အတား ဖြစ်စေသော စစ်ဆင်မှုများ အားလုံးကို ချွှင်းချက်မရှိ ရပ်ဆိုင်း ပေးရန်လည်း တောင်းဆို ထုတ်ပြန် ထားသည်။
Posted by myu shadan at 7:19 PM No comments:
ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ချင်းရိုင်းခရိုင် ချင်းသောင်းမြို့နယ် ဘန်းမိုင် ဆာမခီကျေးရွာရှိ ကချင်တိုင်းရင်းသားများ၏ ၆ ကြိမ်မြောက် Wunli Hkridip ကချင်မနောပွဲကို ဒီဇင်ဘာလ ၄ ရက်တွင် စတင်ကျင်းပနေပြီ ဖြစ်သည်။
ဒီဇင်ဘာလ ၄ ရက် နံနက် ၉ နာရီတွင် ထိုင်းဘုရင် ဘူမိဘော အဒူယာဒက်၏ ၈၇ နှစ်ပြည့် ဂုဏ်ပြုသော အခမ်းအနားကို ထိုင်းအစိုးရ အရာရှိတစ်ဦးက ဦးဆောင်၍ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကချင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNO ဥက္ကဌ ဒူဝါ ဘောမ်ဝမ်လရော်က မနောပွဲ ဖွင့်လှစ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
“ဒီမနက် ၉ နာရီကနေ ထိုင်းစစ်တပ်က အရာရှိတဦး ဦးဆောင်ပြီး ထိုင်းဘုရင်မွေးနေ့ကို ဂုဏ်ပြုအခမ်းအနားလုပ်တယ်။ မနောပွဲကိုတော့ ဆွတ်ဒူဘောမ်ဝမ်လရော်ကနေ ဖွင့်လှစ်ပြီး မနော ကကြပါတယ်၊ ၁၂ နာရီကျော်မှာ ပြီးပါတယ်" ဟု မနောပွဲ ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီမှ ဥက္ကဌ ဦးခေါင်ဟောင်း က ပြောသည်။
မနောပွဲအခမ်းအနားသို့ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO) ဒုဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အင်ဘန်လ၊ ကချင် အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNO ဥက္ကဌ ဒူဝါ ဘောမ်ဝမ် လရော်နှင့် ဒုဥက္ကဌ ဦးအင်ဆန်တူးအောင် တို့လည်း တက်ရောက်ခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ထိုင်းအစိုးရ အထူးစစ်တပ်ဖွဲ့မှ ဖျော်ဖြေရေးအဖွဲ့များ၊ တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ် ရွှေလီ၊ ရင်ကျန်း၊ မန်ရှီ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဂျပန်၊ စင်္ကပူ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်၊ ချင်းမိုင်တို့မှ ကချင်တိုင်းရင်းသား စုစုပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော် တက်ရောက်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
၂၀၀၂ ခုနှစ်မှစတင်၍ ထိုင်းဘုရင် ဘူမိဘော၏ မွေးနေ့အားဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ကချင်တိုင်းရင်းသားများက ၂ နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ် ကချင်မနောပွဲကို ကျင်းပခဲ့ရာ ယခုနှစ်တွင် ၆ ကြိမ်မြောက် မနောပွဲ ကျင်းပခြင်း ဖြစ်သည်။
အဓိကအားဖြင့် ထိုင်းဘုရင် ဘူမိဘောအသက်ရှည် ကျန်းမာစေရန်၊ ထိုင်းနိုင်ငံရေး တည်ငြိမ်အေးချမ်းစေရန်၊ ရပ်ဝေးမြေ ရောက်ရှိနေသော ကချင်တိုင်းရင်းသားများဆုံဆည်းခြင်း၊ ကချင်ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုကို တခြားနိုင်ငံတကာက သိရှိနားလည်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဦးခေါင်ဟောင်း က ပြောသည်။
ယနေ့တွင် Wunli Hkridip မနောပွဲသို့ လူပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော် တက်ရောက်လာပြီး လူပေါင်း ၇၀၀ ခန့်သည် နှစ်နာရီကျော်ကြာ ကချင်မနောပွဲ ကပြခဲ့ကြသည်ဟု သူက ဆိုသည်။
လာမည့် ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်တွင်မူ မနောပွဲတက်ရောက်လာသူများက မိမိတို့ တိုင်းပြည် ငြိမ်းချမ်းလာစေရန်၊ ကျဆုံးသွားသော ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO) ရဲဘော်များ၊ ရှေ့တန်းတွင် ရောက်နေသည့် ရဲဘော်များအတွက် ဆုတောင်းပွဲလည်း ကျင်းပမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ကချင်မနောပွဲကို ကျင်းပနေသော်လည်း မြန်မာပြည်တွင်းရှိ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များအတွက် ထပ်တူခံစားရသည်ဟု သူက ပြောသည်။
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် ပြည်နယ်အစိုးရက ၆၇ ကြိမ်မြောက် ကချင်မနောပွဲ ကျင်းပရန် စီစဉ်နေမှုကိုလည်းပြည်တွင်း အခြေအနေတည်ငြိမ်ခြင်း မရှိသေးသဖြင့် မနောပွဲ ကျင်းပခြင်းကို ကချင်လူထုက ကန့်ကွက်ခဲ့မှုကိုလည်း ထိုင်းနိုင်ငံရောက် ကချင်လူထုကလည်း ကန့်ကွက်ကြောင်း ဦးခေါင်ဟောင်းက ပြောသည်။
“ကျနော်တို့ ကချင်တွေ ကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ လုပ်ဖို့ အားပေးတယ်။ နိုင်ငံတကာမှာ ရောက်နေတဲ့ ကျနော်တို့လည်း သွားတက်မယ်။ ဒါပေမဲ့ သူများတွေ ပိုက်ဆံပေးပြီး လုပ်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့ တန်ဖိုးကြီးတဲ့ ကျနော်တို့ ရိုးရာကို ငွေနဲ့ ဝယ်မရဘူး။ ဒီလို ပိုက်ဆံပေးပြီး လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ အားမပေးဘူး” ဟု သူက ပြောသည်။
မနက်ဖြန် ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်တွင် ထိုင်းဘုရင်၏ ၈၇ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ ဂုဏ်ပြုသော အခမ်းအနား ကျင်းပ၍ ကချင်ထောင်ကာ အက ပြိုင်ပွဲများ ကျင်းပခြင်း၊ ညပိုင်းတွင် ထိုင်းအစိုးရ စစ်တပ်မှဖျော်ဖြေရေးအဖွဲ့မှ ကပြ ဖျော်ဖြေခြင်း၊ လူမျိုးစုအလိုက် မိမိတို့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု အကများဖြင့် တင်ဆက် ကပြခြင်း၊ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဒီဇင်ဘာလ ၆ ရက်တွင် နိုင်ငံတကာမှ ရောက်ရှိလာသောကချင်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ပြီး ညပိုင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ရောက်ရှိလာသော Yak Tim Pyaw Tim Rau (RAU) အဖွဲ့များ၊ ကချင်ရိုးရာအကအဖွဲ့များ၏ ကပြဖျော်ဖြေမည့် အစီအစဉ်များ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှ စတင်ကျင်းပသော ကချင်မနောပွဲသည် ၆ ကြိမ်မြောက် ကျင်းပခြင်း ဖြစ်သည်။
ထိုင်းဘုရင်ကသည် မိမိနိုင်ငံသား မဟုတ်သော်လည်း ကချင်တိုင်းရင်းသားများကို နေထိုင်ခွင့်ပြုရုံသာမက ထိုင်းဘုရင်၏ စီမံကိန်းအရ ကောက်ပဲသီးနှံစိုက်ပျိုးရန်မျိုးစေ့များ ဖြန့်ဝေပေးကာ ထွက်လာသည့် သီးနှံများကိုလည်း ဈေးနှုန်းကောင်းကောင်းပေး၍ ၀ယ်ပေးသည်ဟု ဦးခေါင်ဟောင်း က ပြောသည်။
ယခင်နှစ်များထက် ထူးခြားမှုမှာ မနောပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၊ တရုတ်၊ အန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဂျပန်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံရောက် ကချင်တိုင်းရင်းသားများနှင့် အခြား တိုင်းရင်းသားများ အပါအဝင်စုစုပေါင်း ၂၀၀၀ ခန့် တက်ရောက်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်ဟုသိရသည်။
ထိုင်းဘုရင်က ဘန်းမိုင် ဆာမခီကျေးရွာတွင် ကချင်တိုင်းရင်းသားများကို နေထိုင်ခွင့်ပြုခဲ့သည်မှာ နှစ်ပေါင်း ၃၂ နှစ်ရှိခဲ့ပြီ ဖြစ်ပြီး လက်ရှိ အိမ်ခြေပေါင်း ၁၂၀ ကျော်ရှိကာ ဂျိန်းဖော၊ လီဆူ၊ လောင်ဝေါ်၊ ရဝမ်၊ လချိတ်၊ အဇီး(ဇိုင်ဝါး)စသည့် ကချင်မျိုးနွယ်စုများ နေထိုင်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
Posted by myu shadan at 7:44 PM No comments:
Palaung state liberatoin front မှ ၀မ်းနည်းကြေကွဲခြင်း သ၀ဏ်လွှာ
Posted by myu shadan at 10:16 PM No comments:
ကချင်စာပေ နှင့် ယဉ်ကျေးမှု ကော်မတီ ( တက္ကသိုလ်များ ) ၏ သဘောထား ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
Posted by myu shadan at 8:51 PM No comments:
KIA ဗိုလ်သင်တန်းကျောင်းသို့ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုအပေါ် မကဒတ (ကျောင်းသားတပ်မတော်) ၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
လက်နက်ကြီး ပစ်ခတ်ခံရမှု နှင့် ပါတ်သက်ပြီး KIO ၏ ထုတ်ပြန်ချက်
Posted by myu shadan at 7:30 PM No comments:
Posted by myu shadan at 7:28 PM No comments:
KIA ဌာနချုပ် အနီးမှ အစိုးရ တပ်စခန်းများ ဖယ်ရှားပေးရန် တောင်းဆို
အစိုးရ စစ်တပ်၏ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ကချင်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIA) ဗိုလ်သင်တန်းကျောင်းမှ သင်တန်းသား ၂၃ ဦး သေဆုံး မှုနှင့်ပတ်သက်၍ KIA ဌာနချုပ်အနီးမှ အစိုးရစစ်တပ်၏ စခန်းများ၊ လက်နက်ကြီးများအား ဖယ်ရှားပေးရန် တောင်းဆို လိုက်ကြောင်း သိရသည်။
အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့နှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ ဆွေးနွေးနေသည့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ အောင်မြင်နိုင်ရေး အတွက် ကချင်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIA) ဌာနချုပ် တည်ရှိရာ လိုင်ဇာ အနီးတ၀ိုက်၌ ဖြန့်ကျက်ချထားသော အစိုး ရ တပ်မတော်၏ စစ်စခန်းများ၊ လက်နက်ကြီးများအား ရုပ်သိမ်းပေးရန် ယနေ့ ရက်စွဲဖြင့် ကချင် လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့(KIO) ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ က ကြေညာချက် ထုတ် တောင်းဆိုလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
KIA စစ်ဌာနချုပ် ရှိရာ လိုင်ဇာမြို့ အနီးသို့ လက်နက်ကြီးဖြင့် နိုဝင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့က ပစ်ခတ်မှုကြောင့် KIA မှ စစ်ဗိုလ်လောင်း သင်တန်းသား ၂၃ ဦး သေဆုံးပြီး သင်တန်းသားနှင့်နည်းပြ စုစုပေါင်း ၂၀ ခန့် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း၊ ၎င်းတို့၏ ဗိုလ်လောင်း သင်တန်း ကျောင်းသို့ မြန်မာ့ တပ်မတော်မှ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့် ပစ်ခတ်မှုကို KIO ဗဟို ကော်မတီက ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန့်ကွက်ကြောင်း လည်း ကြေညာချက်၌ ဖော်ပြထားသည်။
အစိုးရ တပ်မတော်၏ လက်ရှိ လုပ်ရပ်ကြောင့် အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့နှင့်တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များ ဆွေးနွေးနေသည့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းများအပေါ် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြောင်းလည်း တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များ က ပြောသည်။
တနိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေး အဖွဲ့ (NCCT) ခေါင်းဆောင် နိုင်ဟံသာ က အစိုးရနှင့် KIA တို့အကြား တိုက် ခိုက်မှုများ လျော့ကျရေး ဆွေးနွေး ဆောင်ရွက်နေချိန်တွင် တိုက်ပွဲများ ဆက်လက် ဖြစ်ပွားနေခြင်းသည် ကောင်းမွန်မှု မဟုတ်ကြောင်း၊ ပစ်ခတ် သေကြေမှုများကြောင့် စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ရကြောင်း၊ ထိုဖြစ်ရပ်ကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ အပေါ်လည်း မထိခိုက်စေလိုကြောင်း ဧရာဝတီ ကို ပြောသည်။
၎င်းက“ဒီဖြစ်ရပ်ကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကိုတော့ အထိုက်အလျောက် ထိခိုက်နိုင်တယ်၊ ယုံကြည်မှုကိုလည်း အများကြီးထိခိုက်စေ တယ်၊ တနိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကိုတော့ အနည်းအကျဉ်း ထိခိုက်စေတယ်၊ ဒါပေမယ့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကိုတော့ မပျက် စေချင်ဘူး”ဟုလည်း ပြောဆိုသည်။
ကချင် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး ကော်မတီမှ အရာရှိ ဦးလမိုင်ဂွန်ဂျာကလည်း ကချင် ခေါင်းဆောင်များနှင့် အစိုးရတို့ အကြား အပြန် အလှန် ယုံကြည်မှုရရှိရေးအတွက် အချိန်ပေး၍ အားထုတ် ကြိုးပမ်းထားရကြောင်း၊ ထိုယုံ ကြည်မှုအား ဆက်လက် အားကောင်း စေရန် လုပ်ဆောင်ရမည့်အစား ယခုကဲ့သို့ ပစ်ခတ်မှုများကြောင့် ခိုင်မာသည့် ယုံကြည်မှုရရှိရန် ခက်ခဲသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဧရာဝတီ ကို ပြောသည်။
ဦးလမိုင်ဂွန်ဂျာ က“မနေ့က တရက်တည်းမှာတင် ၃ နေရာလောက် ပစ်ခတ်တယ်၊ လက်နက်ကြီးနဲ့ ပစ်တာပါ”ဟု ဆိုသည်။
KIA သင်တန်းသား ဗိုလ်လောင်းများ စစ်ရေးပြနေသည့် အချိန်တွင် လက်နက်ကြီး ၂ လုံးဖြင့် ပစ်ခတ်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုပစ်ခတ်မှု နှင့် ပတ်သက်၍ တပ်မတော်၏ အကြီးအကဲများနှင့် အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် သမ္မတရုံး ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်း တို့ထံ စာပို့ မေးမြန်းထားကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေး ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ဗဟိုဌာန(MPC)မှ အစိုးရ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးအကျိုးဆောင် ဦးလှမောင်ရွှေက စစ်ပွဲများ၊ ပဋိပက္ခ ဖြစ်စဉ်များ၌ မြန်မာ့ တပ်မတော်မှ ဖြစ်စေ၊ KIA က ဖြစ်စေ သေကြေကြခြင်း အပေါ် စိတ်မကောင်းကြောင်း၊ စစ်ပွဲများ၊ ပဋိပက္ခ ဖြစ်စဉ်များ၌ မတော်တဆ သေဆုံးမှုများ ရှိတတ်ကြောင်း၊ ထိုသို့ ဖြစ်ရပ်များအပေါ် စိတ်ရှည် သည်းခံကြရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြောသည်။
ဦးလှမောင်ရွှေ က“လူအစုလိုက် သေကြတာ အခုမှ မဟုတ်ပါဘူး၊ အရင်ကလည်း ဖားကန့်မှာ KIA အဖွဲ့က ယမ်းဖောက်ခွဲလို့ လူ အစု လိုက် အများကြီးသေခဲ့တဲ့ ဟာတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်၊ ဆိုလိုတာက စစ်ပွဲတွေ၊ ပဋိပက္ခတွေမှာ မတော်တဆမှုတွေ ရှိတတ်တယ် ဆိုတဲ့ သဘောပါ”ဟု ပြောဆိုသည်။
ထို့အတူ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် ဆွေးနွေးပွဲများ၌ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ရန် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ MPC ကိုလည်း ဖုန်းဆက် အကြောင်း ကြားထားကြကြောင်း၊ လက်ရှိ ဖြစ်စဉ်ကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးများကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်ဟု အတိအကျ မပြောလိုကြောင်း၊ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ရန် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း ဦးလှမောင်ရွှေ က ပြောသည်။
ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရန် ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်နေသည့် ကာလ၌ အစိုးရတပ်မတော် အနေဖြင့် စစ်ရေးအရ အလစ် အငိုက် ဖိအားပေး တိုက်ခိုက်နေမှုများသည် ငြိမ်းချမ်းရေးကို အမှန်တကယ် လိုချင်သည့် စိတ်ရင်းစေတနာ ရှိမရှိဆိုသည်ကို မေးခွန်း ထုတ်စရာ ဖြစ်နေကြောင်းနှင့်ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ရာတွင် အဟန့်အတား ကြီးမားစွာ ဖြစ်စေသည်ကို သတိပြုစေလိုကြောင်း ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖက်ဒရယ် ကောင်စီ(UNFC) ကလည်း ယနေ့ရက်စွဲဖြင့် ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်၍ သတိ ပေး ထားသည်။
အစိုးရ တပ်မတော်၏ သူရဲဘောကြောင်သည့် လုပ်ရပ်အား ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရှုတ်ချကြောင်းလည်း UNFC ၏ ကြေညာချက်၌ ဖော်ပြ ထားပြီး ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအလွန်မှသာ ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်မည်ဟု ဦးရွှေမန်း၏ ပြောဆိုမှုနှင့်လက်ရှိ တိုက်ခိုက်မှုတို့ တိုက်ဆိုင်နေခြင်း ကြောင့် စစ်ရေးနှင့်နိုင်ငံရေး ပူးပေါင်း ကြံစည်မှု တရပ်ဟုလည်း ယူဆနိုင်ကြောင်း ကြေညာချက် က ဆိုသည်။
ထို့အတူ တနိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနှင့်ပြည်သူ တရပ်လုံး လိုလားတောင့်တနေသော ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်စဉ်များ အတိမ်းအစောင်း၊ နှောင့်နှေး ကြန့်ကြာစေသော၊ လမ်းလွဲစေသော လုပ်ရပ်မှန်သမျှအား ပြတ်ပြတ်သားသား ဆန့်ကျင် သွားမည်ဟု လည်း UNFC က ဆိုထားသည်။
ထိုသို့ အစိုးရ စစ်တပ်နှင့် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ တို့အကြား နှစ်ဦး နှစ်ဘက် တင်းမားနေသည့်အတွက် ဆက်လက် လုပ်ဆောင်မည့် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တနိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ ဖြစ်လာနိုင်ခြေ ရှိမရှိ ဆိုသည်ကိုလည်း စောင့်ကြည့်ရမည် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
ပြည်တွင်း တိုက်ပွဲများ ပြေလည်ရန် KIO ဗဟိုကော်မတီနှင့် အစိုးရ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင် ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ တို့ အကြိမ်ကြိမ်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ် မေလ ၁၃ ရက်တွင် စစ်ရှိန် လျှော့ချ၍ ယုံကြည်မှု အပြန်အလှန်တည်ဆောက်ရန်လည်း သဘောတူညီထားပြီး နှစ်ဘက် ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင် သည့် ပဋိပက္ခညှိနှိုင်းဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့တဖွဲ့ကိုလည်း ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
ထိုအဖွဲ့က တွေ့ဆုံမှုများ လစဉ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ၆ ကြိမ်မြောက် တွေ့ဆုံခဲ့သည့် စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်တွင် တပ်မတော်နှင့် KIA အကြား တိုက်ပွဲများ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် လျော့ကျသွားပြီဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။
ထို့နောက် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ ကချင်ပြည်နယ် နယ်စပ်၊ နှင့် ဗန်းမော်ခရိုင် အတွင်းရှိ KIA တပ်များနှင့် တပ်မတော်အကြား တိုက်ပွဲများ ပြန်လည်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ခင်ဦးသာ နှင့် နန်းလွင်နှင်းပွင့် ပူးပေါင်း ရေးသားသည်။
Posted by myu shadan at 7:25 PM No comments:
အစိုးရတပ်လက်နက်ကြီးကြောင့် သေဆုံးသည့် ဗိုလ်လောင်းများထဲတွင် ချင်းတပ်မတော်မှ ဗိုလ်လောင်း နှစ်ဦး ပါဝင်
သတင်း - ခိုနူမ်းထုန် သတင်းဌာန
အစိုးရတပ်မတော်မှ ပစ်ခတ်လိုက်သော လက်နက်ကြီးကြောင့် သေဆုံးခဲ့ကြသည့် KIO စစ်သင်တန်းကျောင်းမှ ဗိုလ်လောင်း ၂၃ ဦးထဲတွင် ချင်းအမျိူးသားတပ်မတော် CNA မှ ဗိုလ်လောင်း ၂ ဦးလည်းပါဝင်သည်ဟုသိရ သည်။
ကချင်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော်(KIA) ဌာနချုပ်၌ ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းတက်ရောက် နေသော သင်တန်းသားများသည် နိုဝင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့က စစ်ရေးပြ လေ့ကျင့်နေချိန်တွင် ကေအိုင်အိုဗဟိုဌာနချုပ် တည်ရှိ ရာ လိုင်ဇာ မြို့အနီး ခရာတောင် ကုန်း၌ တပ်စွဲထားသော အစိုးရ တပ်က လက်နက်ကြီးဖြင့် ပစ် ခတ်ခဲ့မှုကြောင့် ဗိုလ်လောင်း ၂၃ဦး သေဆုံးကာ သင်တန်း နည်းပြအပါအ၀င် သင်တန်းသား ၂၀ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြသည်။
ယင်းသေဆုံးသည့် ဗိုလ်လောင်း ၂၃ ဦးထဲတွင် ချင်းအမျိူးသားတပ်မတော်မှ စေလွှတ်ထားသော တပ်ကြပ် Biak Tin Lian နှင့် တပ်ကြပ် Ram nghak တို့ နှစ်ဦး ပါဝင်သည်ဟု ချင်းအမျိူးသားတပ်မတော်အရာ ရှိတစ်ဦးကပြောသည်။
အစိုးရတပ်မတော်မှ ပစ်ခတ်လိုက်သော လက်နက်ကြီးကြောင့် ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းသား စုစုပေါင်း ၄၀ ကျော်အနက် ၂၀ ဦးမှာ ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးကာ ဒဏ်ရာရသူ များထဲမှ ၃ ဦး ထပ်မံသေဆုံးခဲ့၍ စုစုပေါင်း ၂၃ ဦး သေဆုံးသွားခြင်း ဖြစ်သည်။
အဆိုပါကိစ္စကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန့်ကွက်ကြောင်း ယနေ့ နိုဝင်ဘာလ ၂၀ တွင် ကေအိုင်အိုက ကြေညာ ချက်တရပ် ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီး ကေအိုင်အို ဌာနချူပ် အနီးပတ်ဝန်းကျင်တွင် မြန်မာ့တပ်မတော် တပ်စခန်းများ အလွန်နီးကပ်စွာ တပ်စွဲထားကာ မိမိတို့ တပ်စခန်းဘက်သို့ ရန်လိုသည့်သဘောဖြင့် ပစ်ခတ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ယူဆရကြောင်း KIO ၏ ကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
ထို့ကြောင့် မြန်မာ့တပ်မတော်အနေဖြင့် ကေအိုင်အို ဌာနချူပ် နှင့် နီးကပ်စွာဖြန့်ကြက်ထားသော ခရာဘွမ်တောင်ကြော တလျောက်မှ ၎င်းတို့၏ လက်နက်ကြီးများ ဖယ်ရှားပေးရန် နှင့် တပ်စခန်းများကို ရုပ်သိမ်းပေးရန် KIO က တောင်းဆိုထားသည်။
Posted by myu shadan at 7:17 PM No comments:
Posted by myu shadan at 7:15 PM No comments:
Posted by myu shadan at 7:13 PM No comments:
၂၀၁၃ ခုနှစ် ချင်းမိုင်မြို့မှာ ပြုလုပ်တဲ့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ဆွေးနွေးပွဲတခု မြင်ကွင်း (ဓာတ်ပုံ – ကျော်ခ / ဧရာဝတီ)
ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေရဲ့ အစည်းအဝေးတွေ ပြုလုပ်မယ် ဆိုပါက ထိုင်းစစ်တပ်ကို အကြောင်းကြား ခွင့်ပြုချက် ရယူရမယ်ဆိုပြီး အကြောင်းကြားလာတယ်လို့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် ခေါင်းဆောင်တွေက ပြောပါတယ်။
“အစည်းအဝေးလုပ်မယ် ဆိုရင် နေရာ၊ ပါဝင်မယ့် ပုဂ္ဂိုလ်၊ ဆွေးနွေးမယ့် ခေါင်းစဉ် စတာတွေကို စာနဲ့ရေးပြီး တင်၊ ခွင့်ပြုချက်ရမှ လုပ်ပါဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ထိုင်းထောက်လှမ်းရေး အဖွဲ့တွေက တဆင့် အကြောင်းကြား လာပါတယ်” လို့ ညီညွှတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ (UNFC) ရဲ့ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး (၁) ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာက ဧရာဝတီကို ပြောပါတယ်။
အရင်က ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး ခေါင်းဆောင်တွေ အနေနဲ့ အစည်းအဝေးတွေ ကျင်းပပြုလုပ်ရာမှာ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် အာဏာပိုင်တွေနဲ့ ထိုင်းထောက်လှမ်းရေး အဖွဲ့တွေကို အသိပေး အကြောင်းကြားပြီး ပြုလုပ်ခဲ့ရတာ ဖြစ်ပေမယ့် အခုအချိန်မှာတော့ ထိုင်းစစ်တပ်ကို အကြောင်းကြားပြီး ခွင့်ပြုချက်ကျလာမှ လုပ်ရတော့မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ၎င်းက ဆိုပါတယ်။
အစည်းအဝေး မပြုလုပ်ခင် တိုင်းရင်းသား တော်လှန်ရေး အဖွဲ့တွေ အနေနဲ့ အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရမယ့် အကြောင်းအရင်း၊ ပြုလုပ်မယ့် နေရာနဲ့ တက်ရောက်မယ့် သူတွေကို ထိုင်းနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း တပ်မ ၃ စစ်ဒေသကို ကြိုတင် တင်ပြရမှာဖြစ်ပြီး ခွင့်ပြုချက် ကျလာမှသာ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရတော့မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာက ဆက်ပြောပါတယ်။
ခွင့်ပြုချက် ရပြီးလို့ အစည်းအဝေး လုပ်ချိန်မှာ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ဆွေးနွေးပွဲတွေထဲကို ထိုင်းစစ်တပ်က စေလွှတ်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ် နှစ်ဦးကို ဝင်ရောက် နားထောင် မှတ်တမ်းယူခိုင်းမှာ ဖြစ်ပြီး ရရှိတဲ့ အချက်အလက်တွေကို မြန်မာ အစိုးရဘက်ကို ပြန်တင်ပို့ကြမယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင် အချိူ့ဆီက ကြားသိရပေမယ့် NCCT နဲ့ UNFC ခေါင်းဆောင်တွေက ဒီကိစ္စအပေါ် အတည်ပြု ပြောဆိုတာမျိုး မရှိသေးပါဘူး။
ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကို နိုဝင်ဘာလ ၁၃ ရက်က ထိုင်းနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း ဖိစပ်နုလို့မြို့မှာ ပြုလုပ်တဲ့ ထိုင်း တပ်မ ၃ စစ်ဒေသရဲ့ တပ်မှူးများ အစည်းအဝေးကနေ ဆုံးဖြတ်ချက် ချလိုက်တာ ဖြစ်တယ်လို့ လာရောက် အကြောင်းကြားတဲ့ ထိုင်းထောက်လှမ်းရေး အဖွဲ့က ပြောဆိုသွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ထိုင်းစစ်တပ်ရဲ့ အခုလို လုပ်ဆောင်မှုဟာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း တခုအရ လုပ်တာလို့ ယူဆရပြီး တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း ပြုလုပ်မယ့် အစည်းအဝေးတွေအပေါ် ထိခိုက်မှု ကြီးကြီးမားမား ရှိလိမ့်မယ်လို့ မယူဆကြောင်း ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာက ပြောပါတယ်။
တနိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ (NCCT) ဟာ မြန်မာအစိုးရနဲ့ တနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ဆွေးနွေးဖို့အတွက် လာမယ့် နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်မှာ ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ချင်းမိုင်မြို့၌ ပြုလုပ်ဖို့ စီစဉ်ထားပြီး အဆိုပါ အစည်းအဝေး ကျင်းပဖို့ အတွက်လည်း ထိုင်းတပ်မ ၃ စစ်ဒေသကို အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အခုလို တင်းကြပ်မှုတွေ ရှိလာတာဟာ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး အဖွဲ့အစည်းတွေအပေါ် ဖိအားပေးသလို ဖြစ်စေပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေ အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေ ပြုလုပ်ရာမှာ နှောင့်နှေး ကြန့်ကြာမှုတွေ ရှိလာနိုင်တယ်လို့ UNFC ဒုဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ဟံသာက ပြောပါတယ်။
“ ဒါက တနည်းအားဖြင့်တော့ ဖိအားပေးတဲ့ သဘောလည်း ဖြစ်တယ်။ နောက် အန်ကယ်တို့ အချင်းချင်း တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းဖို့ မလွတ်လပ်တော့ နှေးကွေးတာပေါ့” လို့ နိုင်ဟံသာက ဧရာဝတီကို ပြောပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်၊ ဒုဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ ထိပ်ပိုင်း ခေါင်းဆောင်အချို့ဟာ အောက်တိုဘာ ဒုတိယ အပတ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံကို သွားရောက်ခဲ့ပြီး နေပြည်တော်မှာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်တို့နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။
အခုနှစ် ဇူလိုင်လပိုင်းကလည်း ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ဟာ ထိုင်းနိုင်ငံကို လာရောက်ခဲ့ပြီး လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ် ပရာရွတ်ချန်အိုချာနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး နှစ်နိုင်ငံ စစ်တပ်အကြား ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ရမယ့် အရေးတွေ ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ ထိုင်းသတင်းတွေမှာ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
NCCT နဲ့ UPWC တို့ တနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ဆွေးနွေးမှုတွေကို ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလက ရန်ကုန်မြို့မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး ထူးခြားတဲ့ ရလာဒ်တွေ ထွက်ပေါ်မလာတာကြောင့် အခုလို တင်းကြပ်မှုတွေ ဖြစ်လာတာလို့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး ခေါင်းဆောင် အချို့က သုံးသပ် ပြောဆိုနေကြပါတယ်။
ထိုင်းစစ်တပ် အနေနဲ့ အခုလို လုပ်ဆောင်လာတာဟာ ထိုင်းနိုင်ငံ ထိပ်ပိုင်း ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ မြန်မာ ခေါင်းဆောင်တွေ အကြား တွေ့ဆုံမှုတွေ ရှိလာပြီးနောက်ပိုင်း ဖြစ်ပေါ်လာတာကြောင့် မြန်မာခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ဖိအားပေးမှုတွေကြောင့် အခုလို တင်းကျပ်မှုလုပ်လာတာ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေက ယူဆနေပါတယ်။
Posted by myu shadan at 7:06 PM No comments:
MATAI BAI HTANG GA ! WUNPAWNG MUNG SHAWA HTE KIO/ KIA
AhteaShare ninghkring hpyen du alat ni hpe ndai hku di sat hkrum ai wa
Shat lawt ni ndai hku sha zim nga sana i ???????
Masin nsi maroi nni ai . Ya mung tinang hte nseng ai zawn lu nga ai Wunpawng naw nga ma ai i ????
Hpa rai zim nga mai ai ma .
Mung shawa ni le .
KIA / KIO ning baw ning la ni le .
Myen gaw gaw ngwi gwi roi sat shama wa nga ai le .
Shang lawt ni naw zim nga na i .... Naw zim nga ging ai i ...
Nan hte jahta taw aio simsa lam gaw gara kaw akyu rawng ai ma ?
Akyu nrawng ai lam myen wa madun taw sai le .
HKai hkyi ngu na naw zim nga ma ta ???
SHut mat na re ngu aii ga baw lang na myen wa yawng hpe sat shama hkyen sai le taw ..
KIO salang ni tinangajinghku kasha nlawm na zim nga ai i .
Ndai Hpyen du jawng ma ni yawng hpaji chye janmau gup ngut na sa du ai ni chyu re .
Wunpawng mung shawa yawng hte mung TingnangaJinghku ni nlawm na zim nga ai i ????
SHalat kata Myen SPY grai law rawng ai ngu ai hpe madun taw nga sai re .
Ndai ram majaw taw ai kaw Gap bun lu ai ngu gaw ang mat na nre .Dai hpyen du jawng kata kaw nan Myen SPY lawm nan lawm na re .( ကေအိုင်အေ ဗိုလ် သင်တန်းကျောင်း ထဲ မှာ ဗမာ စပိုင် ရှိလို့အတိအကျပစ်နိုင်တာ။)
Bai gap bun ga le bai anut ga le . Laknank kaba nlu na i ??
Gap bun ngut jang anhte mung shut mat na re sorry yaw ngu yu ga le .
WUNPAWNG ni zim taw magang Myen wa roi gwi magang re .
Shatlawt gai chyan ni mung hkai hkyi galaw nga ma ai ma
Tsa lu bam na nga ai i ? Num ma ni hte pyaw hkawm ai i ? Myen ni gara hku hkyen nga ai ngu pa nchye ai gaw jahkye hku gai chyan i ???Hkyi mata na gai chyan i ???
Hkrat sum mat ai ngu hpe ndai hku yu ra ai .
Ya hkrat sum mat ai marai (20 ) ngu ga
Dai ni kaw na bai kasha hkawng hpra shangai yang
marai (40 )
Ndai (40) kaw na kashu kasha hkawng hpra mayat ai ngu sawn jat yang
Marai (80) Dai kaw na bai mayat maya mat wa ai ngu sawn dat yang Wunpawng myu sha
(1000) Mun sen wan hkrat sum mat wa ai re ngu sawn la ra ai .
Marai (20) sha re ngu hkum sawn . Anhteamatu grai sum machyi mat ai ga re.
MATAI BAI HTANG GA ! WUNPAWNG MUNG SHAWA HTE KIO/ KIA nie.
Posted by myu shadan at 10:33 AM No comments: